အွန်လိုင်းအခမဲ့ရှေ့နေ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။ ဒါဟာလူသိများသော၏ကုန်ကျစရိတ်ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးယနေ့အချိန်တွင်အတော်လေးမြင့်မားလူတိုင်းတတ်နိုင်၊ထိုကဲ့သို့သောအပျော်အပါး။ သို့သော်၊ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်၊အသီးအသီးဧည့်သည်များလက်ခံရရှိလိမ့်မည်အခမဲ့အွန်လိုင်းနှင့်အတူညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကျွမ်းကျင်ရှေ့နေသို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်။ အွန်လိုင်းရှေ့နေပေးလိမ့်မည်ဟုအရည်အသွေးအကူအညီအတွက်အတိုဆုံးအချိန်။ ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအတော်လေးအလွယ်တကူ:ရန်လုံလောက်သောဖြစ်သတ်မှတ်သင့်အမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်တုန့်ပြန်မှုအတွက်နဲ့ဖော်ပြဖို့အသေးစိတ်အတွက်သဘာဝတရား၏ပြဿနာ။ ရရန်မည်သို့အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်. အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊မေးတဲ့မေးခွန်းအတွက်၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေများမည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်မည်သည့်အချိန်များအနှစ်မှတဆင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုက"အကူအညီလိုင်း"တွင်တည်ရှိပြီးအထက်လက်ဝဲထောင့်ပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏စာမျက်နှာများ။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်သင်ရနိုင်လိမ့်မည်အသေးစိတ်အဖြေသင့်မေးခွန်းကိုအတွက်၊လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊သင်စီစဉ်တဲ့အစည်းအဝေးသို့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခြင်း၏မသိမသာကွဲပြားအနေဖြင့်တိကျသောပြဿနာတစ်ခု။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ပံ့မည်သည့်မေးခွန်းများကို၊သို့သော်အများစုမှာအကြောင်းအရာဆက်စပ်ညှိနှိုင်းအယူခံဝင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအခွန်အာဏာပိုင်များ၊စာတမ်းများ၏လုပ်ငန်းနှင့်များမှတ်ပုံတင်ပိတ်သိမ်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း။ မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအွန်လိုင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်အရအကြံဉာဏ်အတွက်အွန်လိုင်းရေးပါ၏ကွာရှင်း၊၊အမွေဥစ္စာကို၊အိမ်ခြံမြေ၏ဌာနခွဲ၊လွဴဒါန္းစာချုပ်၊တရားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှဘဏ်များအဖြစ်၊အဖြစ်အများအပြားမေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်စာရင္းဘာသာရပ်:သင့်လျော်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းကိုင်နှင့်ခွန်စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်၎င်း၏ပြန်လည်နာလန်ထူ။
မတော်တဆရှေ့နေအြန္လိုင္း ၂၀၁၅ မတော်တဆရှေ့နေအလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အွန်လိုင်းအပေးအရေးပေါ်ဥပဒေအထောက်အကူဖို့ယာဉ်မောင်း။ အခမဲ့နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုင်းပြည်အတွက်လူတိုင်းတွင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်အရည်အသွေးမြင့်ဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ မတော်တဆရှေ့နေအွန်လိုင်းကနေနေ့စဉ် ၉-၀၀ အ ၂၀-၀၀။ အကောင်းဆုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်အွန်လိုင်းအကူအညီအပေါ်မည်သည့်အရေးအတွင်းသူတို့ရဲ့အရည်အချင်း။ အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူမတော်တဆ:ရတဲ့အွန်လိုင်းအကူအညီအပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်း၊အဆိုပါယာဉ်မောင်းနိုင်ရုံအတွက်အန္တရာယ်အခြေအနေနှင့်စတင်ဆောက်လုပ်ဖို့အမိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးမိနစ်၊ဆုံးရှုံးမပါဘဲအဖိုးတန်အချိန်နှင့်အခွင့်အလမ်း၌ရပ်၏။ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၏မတော်တဆရှေ့နေအခုတော့အွန်လိုင်းနိုင်မည်သည့်ယာဉ်မောင်းမဆို။ ဒါဟာမြန်ဆန်ပြီး၊အဆင်ပြေနှင့်အာမခံအခဲကိုအောင်မြင်။ အွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများသာရှိသည်ကိုအကောင်းဆုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမတော်တဆရှေ့နေ။ သင်သေချာပါစေနိုငျသောအများ၏သဘောတူညီနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအလွန်အမင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေ(သို့မဟုတ်ရှေ့နေတစ်ဦး)နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှု၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီတယ်လီဖုန်းဖြင့်။ နှင့်အတူမတော်တဆရှေ့နေအွန်လိုင်းသင်ရလိမ့်မယ်ရိွေယန္တရားပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမျဉ်း၏ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြည့်စုံ၏စာရင်းအားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ရပ်အပါအဝင်၊နှင့်အရေးပေါ်။
ဒီနေ့အဓိကဆိုလို၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကြောင်းကားပဲရွှေ့နိုင်၊သင်ရရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဦးလိုင်စင်နှင့်အနာခံအသွားအလာ။ အမှုများစွာအတွက်၊အဆိုပါယာဉ်မောင်းမင်တကာချိုးဖောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၊သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံချိုးဖောက်နှင့်အခွင့်အရေးများမော်တော်ဆိုင်ကယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ၊အသုံးဝင်သောအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အပေါ်မတော်တဆမှု၊တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပတ်ပတ်လည်နာရီ။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေအသက်ဘယ်လောက်သင့်ကားဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားမှရံဖန်ရံခါအရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်။ မည်သည့်အပင်သေးငယ်တဲ့အပျက်နိုင်မည်မှမှုတ်ကြီးမားအချိုးအစား။ ယာဉ်မောင်းချိန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါထမြောက်ဖို့၊အဖြစ်သူ၏အမည်ကိုပြီးသားဖြစ်ဆွဲပြီးတက်နှင့်အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဆင်းရဲ၏အခြင့္အေ။ အမိန့်အတွက်လိမ်လည်မှုမှရှောင်ရှားရန်ခံရဖို့လိုအပ်၊အအေးဖို့ရှိသည်အာရုံကြော၏သံမဏိနှင့်၏ကြီးမားသောငွေကြေးပမာဏအတွက်အသိပညာအလယ်၏။ သာမန်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်မရှိပြီပင်ငယ်လေးတစ်အစိတ်အပိုင်း၏ဤအရည်အသွေး။ အများဆုံးစံပြရွေးချယ်မှုအတွက်မည်သည့်အခြေအနွယ်နှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်များ၊စစ်သားစုဆောင်းရေးမှထောက်ခံမှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏မတော်တဆမှုများအတွက်။ နာရီပေါင်းများစွာအဘို့ရှာကောင်းတစ်ဦးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှေ့နေမတော်တဆမဖြစ်သင့်၊သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ပင်လျှင်လိုလားစောင့်ရှောက်ဖို့အဖော်၊သူခံ၊မတော်တဆရှေ့နေ၊အွန်လိုင်းအကြံပေးအခမဲ့၊အဘယ်သူမျှမဖုန်းကို ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမှရရှိနိုင်အားလုံး။ မည်သို့အများစုကမတော်တဆဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အတူ ရာချီ၊ထောင်ချီ၊သန်းချီ။ နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်ဥပဒေ၊တီထွင်မှုနှင့်အခြားအပိုင်းပိုင်း၏ဥပဒေတိုးတက်လာဖို့ကား။ ကံမကောင်းစွာ၊အားလုံးရဲ့ပြုပြင်ဖို့ကိစ္စမှာအချိန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်ဤအကြောင်းကြောင့်၊ကလူပို။
မတော်တဆရှေ့နေ-အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအပတ်နာရီ မည်သို့ပင်သင်မေးခွန်းပေါ်လာနိုင်တယ်၊ရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်ထားမတော်တဆမှုများအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်အဖြေ။ သင်လုံလောက်မေးမြန်းဖို့သင်၏မေးခွန်းအတွက်အွန်လိုင်းပုံစံအောက်တွင်၊နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ရနိုင်အကူအညီလိုအပ်-အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ဦးအနေဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေများအတွက်မတော်တဆ။ သင်ရေးသားနိုင်လုံးဝမည်သည့်မေးခွန်းများကိုနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများ၏မတော်တဆမှု၊ပြင်ဆင်မှု၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်လည်းဥပဒေရေးရာအခြားအခက်အခဲများ။ သောနေ့ဘယ်အချိန်သင်မေးဖို့ပူးပေါင်းပြီး၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနာရီပတ်လည်မှမတော်တဆရှေ့နေနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အားလုံးလိုအပ်သောအသိပညာ၌သင်တို့ကိုကူညီဖို့အထူးသဖြင့်အခြေအနေ။ သငျသညျလညျးရနိုငျအခမဲ့ဥပဒေအကူအညီဖုန်းဖြင့်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်လိုအပ်ရန်သတ်မှတ်သင့်ဖုန်းအရေအတွက်အွန်လိုင်းပုံစံ၊အောက်နှင့်ငါးမိနစ်အတွင်းသင်ခေါ်ဆိုမှုကျွန်ုပ်တို့မတော်တဆရှေ့နေများအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုရန်ကူညီမှာဖြေရှင်းရန်ရှုပ်ထွေးဥပဒေရေးရာအခြေအနေ။ ပဲထားခဲ့ရေအတွက်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပညာအကြံပေးသင်ဖုန်းပေါ်မှာအများအတွက်အားလုံးသင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောယာဉ်နှင့်သာ။ ဒါကြောင့်၊သင်လိုအပ်လျှင်အခမဲ့အွန်လိုင်းတစ်ဦးထံမှအကြံဉာဏ်များကိုရှေ့နေ၊အကြမ်းဖျင်းသင်၏မေးခွန်းပုံစံအတွက်အောက်နှင့်အကိုကလစ်နှိပ်ပါ"မေးခွန်းတစ်ခုမေး"။ အဆင်ပြေများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူ၊သင်ထွက်ခွာနိုင်၏။ သင်ရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်၊တစ်ဦးစကားလက်ဆုံပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ဟန်မဟုတ်သေချာပေါက်၊မေးခွန်းမတော်တဆရှေ့နေစေလွှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးေၾကာ္ျ၏မေးခွန်းကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံ၊အခမဲ့၊ကျွမ်းကျင်၊ပတ်လည်-အ-နာရီဥပဒေရေးရာအကူအညီသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ လုပ်ချင်ရင်နှင့်အတူစကားပြော၏အထူးကုဆရာဝန်ကြီးမဟုတ်အွန်လိုင်းအဆိုပါဖုန်းနံပါတ်တွင်၊ကိုယ့်အသရေနှင့်သင်ချက်ချင်းပြန်သင်မခေါ်သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုရန်။
မတော်တဆရှေ့နေအထူးကုဖြစ်ပါသည်ဥပဒေဒေသများရှိ၊အဓိကအလှုပ်ရှားမှု၏အရာဖြစ်၏ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နှင့်အမူအကျင့်မှုများဆင်ရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရပ်များ။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအဖြစ်အခမဲ့ ဤတစ်မျှမျှတတဘုံအလေ့အကျင့်ခွင့်ပြုသည့်လိုင်းရရှိရန်အသေးစိတ်၊ပြည့်စုံသောအဖြေသင့်မေးခွန်းကိုအတွက်။ ထိုကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်ဆိုရင်မ၊သင်အမြဲသွားကြဖို့အခြားကုမ္ပဏီ၊ဘယ်အရာမှ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ခြေပါဝင်အဖစ္ပါတယ္။ မြို့ကြီးများအတွက်မှတ်တမ်းတင်များအတွက်နေ့စဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှုပေါင်းမှဆက်စပ်။ ဒါကြောင့်မတော်တဆမှု၊ခိုးမှု၊ညှစ်ပိုက်ဆံအများအားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ၊နှင့်ပို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအစဉ်ပေးရန်အလျင်အမြန်နှင့်အရည်အချင်းအကူအညီအတွက်ဒီအခြေအနေ။ အခမဲ့အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်တွင်မတော်တဆဖုန်းပေါ်မှာ-ဒါဟာသင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အထောက်အပံ့အတွက်မည်သည့်အခြေအနေတွင်အဆိုပါကားလမ်း။
အာဏာ၏ရှေ့နေသည်တရားဝင်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်အာဏာသည်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊နှင့်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်အပျက်အတွက်အစီအ ။ တစ်ခုချင်းတစ်ဦးမေ့မြောသို့ကျရောက်မှုကြောင့် နာမကျန်းမှ၊ဥပမာအားဖြင့်အဘို့၊အဘယ်သူကိုမှလူတစ်ဦးသူသို့မဟုတ်သူမပေး၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေရှိသည်လိမ့်မည်အလုပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သူတို့၏ကိုယ်စား။ ၎င်း၏အထိခိုက်မခံတဲ့သဘောသဘာဝ၊ပြည်နယ်အများစုလိုအပ်ဤအမျိုးအစားစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ဖို့အတြက္အျမီကဖန်ဆင်းသည်။ ရှိပါတယ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏တန်ခိုးရှေ့နေ။ ကန့်သတ်၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေခွင့်ပြုနိယာမ(ပုဂ္ဂိုလ်အလှူ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ)မှရွေးချယ်သောကိုယ်စားလှယ်(ကိုလက်ခံရရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ)ရှိပါတယ်။ အပြည့်အဝ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ၊အခြားတစ်ဖက်တွင်ထောက်ပံ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျော်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုနိယာမရဲ့ဘဏ်ဘဏ္ဍာရေး၊ဘဏ်အကောင့်အသစ်များ၊ငှားရမ်းခွင့်၊စသည်တို့ကို။ တတိယအမျိုးအစားသည်တာရှည်ခံ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ၊ရာထောက်ပံ့သောကိုယ်စားလှယ်အမူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတန်ခိုးဖြစ်အပျက်အတွက်သူသို့မဟုတ်သူမသည်ဆေးပညာ ။ လျဉ်းသောဥပဒေများကိုမူကြမ်းရေးဆွဲများ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေစာရွက်စာတမ်းများကိုပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှကွဲပြားခြားနား။ သူကပြောပါတယ်နဲ့အတူ၊ပြည်နယ်အများစုလိုအပ်သလိုဤစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ရေးဆွဲအားဖြင့်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေနှင့်အတူ တက်ကြွလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ဖို့လိုင်စင်။ ဒါကြောင့်၊စာချုပ်စာတမ်းအများပြည်သူလည်းရှေ့နေသူသို့မဟုတ်သူမအနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တရားဝင်ဖန်တီး၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ။ အခါအာဏာ၏ရှေ့နေစာရွက်စာတမ်းဆြဲခဲ့ပါသည္၊ထိုရှေ့နေဖျော်ဖြေဤတာဝန်တာဝန်ရှိသည်သေချာအောင်အကြောင်းအရာတွေကိုများမှာတိကျမှန်ကန်ဖို့အကောင်းဆုံး၏သူသို့မဟုတ်သူမ၏အသိပညာ။ ဤ၊ဟုတ်ပါတယ်၊အများအတွက်အထုပ္ကို၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအများပြည်သူစာချုပ်စာတမ်း။ အခါတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းအတြက္အျ၊အများပြည်သူစာချုပ်စာတမ်းမရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဖို့အကြောင်းအရာတွေကို၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ဒါပေမယ့်အစားသူသို့မဟုတ်သူမအတည်ပြုစာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်အားဖြင့်အဆိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စာချုပ်စာတမ်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံ။ နေစဉ်ယူႏိုင္ပါ ယေဘုယျအားဖြင့်တားမြစ်မှမူကြမ်းရေးဆွဲ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေစာရွက်စာတမ်းများ၊သူတို့နေဆဲအ -သူတို့ယူဆရင်သူတို့လိုက်နာသူတို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဥပဒေများကို။ အချို့သောပြည်နယ်များတွင်သာလိုအပ်သောနိယာမရဲ့လက်မှတ်အဖြစ်အတြက္အျနေစဉ်၊အခြားသူများအလိုအပ်ဖြစ်စေအမူသို့မဟုတ်သက်သေရဲ့လက်မှတ်အဖြစ်အတြက္အျ။ ရှိမရှိသင်ပေးရန်အစီအစဉ်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ၊သင်သည် သင့်တူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်း၏သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၏ဥပဒေများနှင့်ပတ်သက် ၏ဤစာရွက်စာတမ်း။ ဏာ၏ရှေ့နေစာရွက်စာတမ်းတော်တော်အများကြီးအတူတူအဖြစ်အခြားမည်သည့်စာရွက်စာတမ်း။ အများပြည်သူစာချုပ်စာတမ်းစစ်ဆေးအပင်းဖော်ထုတ်ပြီးလေ့လာဖြစ်သူသို့မဟုတ်သူမနိမိတ်လက္ခဏာစာရွက်စာတမ်း။ လျှင်တစ်စာချုပ်စာတမ်းသည်ဖြစ်စေအမူသို့မဟုတ်အေးဂျင့်တစ်ဦး၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေသူသို့မဟုတ်သူမသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တားမြစ်ကနေ စာရွက်စာတမ်း။ ဒီအပြောင်းအလဲများ၊နှင့်ပြည်နယ်အများစုအတိအလင်းတားမြစ်ဤအမျိုးအစား၏အပြုအမူ။
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်များအတွက်ယာဉ်မတော်တဆမှု အသွားအလာရှေ့နေတစ်ဥပဒေကြောင်းအရ-နာရီကိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းများကိုဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ကား။ မတော်တဆရှေ့နေများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ယာဉ်မောင်းကနေလိမ်လည်မှုအခြေအနေများမတော်တဆမှုအပြီးမှတရားမဝင်လုပ်ရပ်၏။ေ ၏အားသာချက်ကိုယူကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊အသီးသီး။ ဆက်သွယ်မတော်တဆရှေ့နေများရရှိနိုင်နာရီပတ်လည်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုသောတယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ။ အခါသင်သည်အရှေ့နေများအတွက်မတော်တဆမှု၊သူတို့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ရေးလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိုက်အားလုံးနောက်ထပ်လုပ်ရပ်။ ရှေ့နေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏တရားဝင်ရပ်တည်မှုကို၏အပြုအမူကိုရဲ၊၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကို၏သက်တမ်းအစရိတ္မ်ား၊ရရှိမှုနှင့်အသက်သေအထောက်အထား၊ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဆက်များအတွက်ယာဉ်မောင်း;ဒါကြောင့်ကိုထုတ်လုပ်ငြင်းပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ယာဉ်မောင်း;အလိုက်အဆာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(ဆုံးဖြတ်ချက်)၊ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကိုယ်တော်၏အမှု၏ပြစ်ဒဏ်ရဲ။ မတော်တဆရှေ့နေအလုပ်လုပ် ၂၄ နာရီနေ့က၊၇ ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်၊၃၆၅ လက်ထက်တစ်နှစ်ကို။ ပေးဥပဒေရေးရာအကူအညီမှယာဉ်မောင်းများဖုန်းပေါ်မှာ။ က်ဥ္းေျမာင္း၏အလုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိအပေါင်းတို့သည်ပရိယာယ်များ၏လက်ရှိဥပဒေ၊ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းအစွန်အဖျားမှအကြေးခွံမှအ-အလွန်မြင့်မားသည်။
ကုမၸဏီအလုပ္ေစီးပွားရေးနှင့်အလုပ်သမား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်မတည်ရှိတခါကဖယ်ရှားခဲ့ပြီး('ကိုချွတ်ဒဏ်ခတ်')အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှာကုမ္ပဏီ။ အခါ ကုမ္ပဏီ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချွတ်ဆပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်၎င်း၏အကြွေး။ မည်သည့်ပိုက်ဆံထွက်ခွာသွားဖို့။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဆးေနိုင်ရန်အသင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ဘဏ်အကောင့်။ လျှင်ငွေမနဲအကြားရှယ်ယာအချိန်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီကနေဖယ်ရှားပစ်မှတ်ပုံတင်ရန်၊အကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအရိုးအခွင့်နှင့်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်:နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်အားဖြင့်တစ်စာချုပ်စာတမ်းအတွက်တရားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ပထမနည်းသည်လျှောက်ထားမရှိခြင်းအတွက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုများအကြားမှခေံ၊နှင့်လည်းအဖြစ်အပျက်အတွက်အ အခေါ်အဝေါ်များ၏လည်ပတ်မှုစနစ်(၆ လ)လျှောက်လွှာနှင့်အတူအဘို့အမွေဥစ္စာကိုမချိုးဖောက်။ ရေးသားပြီးနောက်လျှောက်လွှာကိုနှစ်ဝက်၊အယူႏိုင္ပါကိစ္စရပ်များကိုအတည်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားသည့်အချိန်မှာမှ။ တရားရုံး၌နှင့်အတူတစ်ဦးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်ကိုများအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မွေတစ်ခုခုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အမွေစားအမွေမိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်သူ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သည်။ သည်နိုင်ရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းကျမ်းစာ၌ရေးထားခံရဖို့ပိုပြီးအရည်အချင်း၊ဒါကြောင့်ကျိုးနပ်ဆက်သွယ်ဖို့ရှေ့နေတစ်ဦး။ လည်း၊မှာမည်သူမည်ကိုယ်စားပြုအကျိုးစီးပွားအတွက်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အမွေဥစ္စာအားဖြင့်တရားရုံး၏အမှု၌အလွန်သက်တမ်းအတွက်ဗြိတိန်အင်အားမဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်များ၏အခြေခံပေါ်မှာလျှောက်လွှာတင်သွင်းတွင်းကာလအထိ ၆ လကနေအချိန်အခြေအနေတွေကိုတားဆီးကြောင့်လဲကျသွားသည်။ တရားရုံးရောက်သောအကြောင်းရင်းများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအမွေစားအမွေခံများ၊နှင့်၊၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သူတို့အသိအမှတ်ပြုအဖြစ်ရိုသေလေးစားမှု၊ဆုံးဖြတ်အပေါ်ပြန်လည်ခေါ်အဝေါ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အခွင့်အရေးအဘယ်သူအမွေဆက်ခံခြံမြေများသိမ်း။ အကယ္ခြံမြေရောင်းဖို့ပြော မှနျသောဝယ်လက်၊ထိုအခါကဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမှပြန်လာ။ ရှိပါတယ်လျှင်သည်အဘယ်သူလူတစ်ဦးအပေါ်အလျင်အမြန်ရောင်းချခြံမြေအကြောင်းသိထားလက်၏အမွေစားအမွေခံသောသူကိုနောက်ဆုံးနေ့၊အနောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နှင့်အတူကြေညာချက်၏တောင်းဆိုမှုကိုပြန်လည်နာလန်ထူများအတွက်အပျက်အစီး၏။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အမွေဥစ္စာအားဖြင့်အဆိုပါတရားရုံးသည်အလွန်မကြာခဏ၊အထူးသဖြင့်၎င်း၏အမှန်တကယ်အမွေး။ အမွေစားအမွေခံမလုပ်ချင်ဒီသာအခါ၊ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအမှုပေါင်းရှိပါတယ်၊အများအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအမှု၌အမည်ပေးရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေး၎င်း၏မွေး:ဖြတ်ပိုင်းများ၏ငွေပေးချေမှုတဲဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူ၏ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများပြုပြင်ရေးအတွက်၊စသည်တို့ကို။ ရှိပါတယ်လျှင်ငြင်းပွားနှင့်အတူအခြားကျောင်းရှိလိမ့်မည်၊ လို၏စောင့်ရှောက်မှုယူစုဆောင်းသက်သေအထောက်အထား:စာရွက်စာတမ်း၊သက်သေများ၊စသည်တို့ကို။ မကြာခဏဒီလိုအပေးပို့ခြင်း၏တောင်းဆိုမှုများဖို့အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ဒီမှာကရရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီမှရှေ့နေတစ်ဦး။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အမွေဥစ္စာအားဖြင့်တရားရုံးကအလုပ်လည်း၊အကယ် အမွေစားအမွေပညတ်တရားအားဖြင့်ယုံကြည်သောအမည်သည်အတုသို့မဟုတ်ကကြီးရေးကသူထိုက်သောအချိန်၊သို့မဟုတ်အောက်တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ယင္းညြတ္ျ၊လျှောက်ထားမှု၏အမှု၌ဆုံးရှုံးမှုထောက်ပံ့စာရွက်စာတမ်းများ။ ဘဝ၏အမွေဥစ္စာလက်ရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ၊များစွာသောပႏုိင္ဖုိ၊မကြာခဏလိုအပ်တန်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဆပ်ဖို့အဘို့အဝန်ဆောင်မှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြည်နယ်အခကြေးငွေ။
မေးခွန်းရှေ့နေအခမဲ့အွန်လိုင်းနာရီဝန်းကျင် အကြံဉာဏ်ပေးဖို့အားလုံးသည်လျှောက်ထားတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ပေးဆောင်အခြေခံ; အထောက်အကူအတွက်မူကြမ်းရေးဆွဲအမျိုးမျိုးသောအမျိုး၏တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ; ကိုကိုယ်စားပြုလိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တရားရုံးများ၊အလောင်းတွေ၏အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အခြားဘာသာရပ်များ; တရားမျှတမှုကိုရှာအားလုံးအတွက်အခြေအနေ။ လိုသူလူတိုင်းအရအဖြေကိုမိမိမေးခွန်း၊ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်အတြက္အကြံဉာဏ်။ ဖြည့်စွက်ကာ၊သငျသညျရှေးခယျြဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအထူးကုမည်သူတိုက်ရိုက်ပေးနှင့်အတူဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ထူးခြားနှင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အမိန့်ကိုစာရွက်စာတမ်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊သင်အပေါ်အဘိုးထားရန်။ မှတပါး၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အဖြေကိုရှာဖွေသောမေးခွန်းမေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နိုင်သည့်အတွက်အသုံးဝင်စေအထူးသဖြင့်အခြေအနေ။ ရအကြံဉာဏ်ကောင်းအပေါ်သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုခေါ်တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ပေး၊သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။
အမြဲတမ်းတရားရုံး၏ အနေနဲ့င့္လွစ္မည္ျအဖွဲ့အစည်းမှာတည်ရှိပရနယ်သာလန်အတွက်။ အ မတစ်ဦးကတရားရုံးတွင်အစဉ်အလာသဘောမူကားထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများ၏ပင္ပါဘီဖြေရှင်းရန်ငြင်းပွားမှုများပျေါပေါကျထွက်၏နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များအကြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကတီ။ ထိုအမှုကိစ္စအထွာအကွာအဝေး၏ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များပါဝင်သောနယ်မြေနှင့်ရေကြောင်းနိမိတ်၊ဋ္ဌ၊လူ့အခွင့်အရေး၊နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု။ အ ကရိုင္တအားဖြင့်နှစ်ဦးသီးခြားင္ငံခ်င္းတရားနဲ့အပေါင်းအသင်း၏အ ၁၂၁။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ၊ဒါပေမယ့်အ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကကုလသမဂၢလေ့လာ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနန်းတော်ကနေတညျဆောကျခဲ့ ၁၉၀၇ မှ ၁၉၁၃ ခုနှစ်အတွက်အ သာအမႈမ်ား။ ထို့အပြင်အဆောက်အဦအိမ်အမႈမ်ားအကယ်ဒမီ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ငြိမ်းချမ်းရေးနန်းတော်စာကြည့်တိုက်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့။ အ မတစ်ဦးကတရားရုံးတွင်အသိအခေါ်အဝေါ်တစ်ခု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအရာဝတ္ထုနှင့်အတူရှိခြင်း၏အမြဲတမ်းအလွယ်တကူရရှိနိုင်နည်းလမ်းများအဖြစ်အစေခံရန်အမြဲမေး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိများနှင့်အခြားဆက်စပ်နေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊အပါအဝင်ကော်မရှင်၏စုံစမ်းပြီး ။ အတြင္းမွာေကာင္စီ(တရားဝင်အမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ)သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်အားလုံးမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုအသိအမှတ်ပြုမှ။ ဒါဟာသဘာအားဖြင့်ထိုဝန်ကြီးများ၏နိုင်ငံခြားရေးရာအဆိုပါနယ်သောသူသည်လည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ ဒါဟာအများအတွက်တာဝန်ရှိ'ဦးတည်ချက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗျူရို၊ညွှန်ကြားအဖွဲ့၏ဘတ်ဂျက်နှင့်အစီရင်ခံစာအပေါ်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗျူရိုကိုနိုင်ငံ၏အ နှင့်ဦးဆောင်သည်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး။ ဒါကြောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးသိပ္ပံ၊သုတေသန၊အစီအ ခုံတ္ခံု။ တရားသူကြီးသို့မဟုတ် ကြောင်းကြားမှုများဟုခေါ်ကြသည်အဖွဲ့ဝင်များ၏။ အသီးအသီးအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ခန့်အထိလေး'၏လူသိများထွန်းရေးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၏အမြင့်ဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားဂုဏ်သတင်းနှင့်ပြုပြင်လက်ခံရန်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ အတွက်ဖြိုး ၆-နှစ်အခေါ်အဝေါ်။ အဖွဲ့ဝင်များ၏အသီးအသီးအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အတူတကွဖွဲ့စည်း'အမျိုးသားအုပ်စု'။ ဖွဲ့ဝင်များ၍သာခုံသမာဓိအမှုများအတွက်သောအ သည္။ အမျိုးသားအုပ်စုစေခြင်းငှါအဆိုပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်။ အ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောထွေးလာတယ်နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့၊အရာ၎င်း၏နေရာတွင်အလားတူအဆောက်အဦ။ အ သို့သော်မ၏အစိတ်အပိုင်းလသမဂၢ၊သာ္လည္းရှိသည်ပါဘူးလေ့လာသူအဆင့်အတန်းအတွက်အထွေထွေညီလာခံကတည်းက ၁၉၉၃။ အရေးဆောင်းပါးများ ၃၀-၅၇၏ပစည်းဝေးကြီး၏၁၈၉၉၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဆင်ပြေဗားရှင်း၏လက်ရှိစာချုပ်အကြား။ သူတို့အက္ဖ္ေအတွက် ၁၉၀၇၊၏ဖန်တီးမှုအကျဉ်းအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရိုးရိုးအမှုများအများဆုံးထင်ရှားပြောင်းလဲခဲ့သည်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ ၁၉၂၀ တွင်အများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ ပထမဦးဆုံးလုပ်ရပ်၏တီမီ အ အပ္ခ်က္တစ္ခုမွာဒါခေါ်'ပင္ယူ'၊အဆိုပါပြဿနာနှင့်အရည်အချင်း၏အခုံ(့)။ တရားစွဲဆိုထို့နောက်အတွက်ကောက်ကိုနှစ်ဦးအဆင့်:ကျမ်းစာနိဋ်နှင့်ခံတွင်း။။။။ တရားရုံးအနားယူတာနဲ့အငြင်းအခုန်ကျော်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကောက်ချက်ချသောအမှုအားဖြင့်တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့အများစု၏မဲ။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်ထုတ်ဝေသောအမွတ္မနှင့်အတူ၊မည်သည့် ။ အစောပိုင်းတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့ကြ အားဖြင့်အ သူတို့ကိုယ်သူတို့၊ဒါပေမယ့်အတွက် ၁၉၀၇၊တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတြင္း(အ)။ အမွတ္မအစုံဖတ်ရန်အများပြည်သူအစည်းအဝေး၏အထံတော်၌အေးဂျင့်များနှင့်ရှေ့နေများ၏ပါတီမှအမှု။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ချည်နှောင်ပါတီများ၊ယန္တရားအဘို့အအယူခံဝင်။ အဆိုပါဘတ်ဂျက်၏ လာပံ့ပိုးမှုများကိုထံမှ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဝင်ငွေအားဖြင့်ခုံသမာဓိအမှုပေါင်း။ အဆိုပါပမာဏပေးဆောင်ခံရဖို့တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်မကွေးမြို့ပေါ်အခြေခံသည်အဆိုပါစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အကမ္ဘာ့စာပို့။ တီခုံပေးဆောင်ဖို့ရှိသည် ကုန်ကျစရိတ်၏အပင္ပါရုံးဖွင့်ထားဖို့နားထောငျဖြစ်ရပ်အပါအဝင်လစာအ ၊တုိက္ဆုိင္မႈနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်၊ဒါပေမယ့်မအပါအဝင်မောင်းသူအဖွဲ့အစည်း၏)။ ကုန်ကျစရိတ်၏ခုံသမာဓိအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေမှုအမှုနှင့်ဆွေးနွေးမှုများဖြစ်စေခြင်းငှါအကြားအ နှင့်အဆိုပါပါတီကျော်ကြေးအစီအစဉ်။ ပါတီအစည်းဝေးတွင်ပစိဖိတ်အခြေချ၏အငြင်းအ ၁၈၉၉(၇၁ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ)နှင့် ၁၉၀၇(၁၀၁ ဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စု)အလိုအေလ်ာက္ပါတီအ။အဖြစ် ၅၁ ဖြစ်ကြောင်းပါတီမှနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊အ ရှိပါတယ် ၁၂၁ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ:၁၁၉ အဖွဲ့ဝင်ကုလသမဂ္ဂ၏၊အဖြစ်အရင္းနဲ့ပါလက်စတိုင်း။ တ၏အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်နိုင်ငံတကာအငြင်းဆုံးဖြတ်ချက်။ ဒါဟာတွင်တည်ထောင်ခဲ့ ၁၈၉၉ အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအဟိဂ်လူဦးေအောက်ဆောင်းပါးများ ၂၀ မှ ၂၉ အ ၁၈၉၉ မႈမ်ားများပစိဖိတ်အခမ္းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ။ မှာဒုတိယအဟိဂ်လူဦးေရ၊အစောပိုင်းစည်းဝေးကြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၀၇ များပစိဖိတ်အခမ္းအနား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ။ အခယ်မှာအများကသာဒုတိယရုရှား၏'အရာဝတ္ထုနှင့်အတူရှာကြံ၏အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုနည်းလမ်းသေချာစေရန်လူမျိုး၏အကျိုးကျေးဇူးများအစစ်အမှန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောငြိမ်းချမ်းရေးအပေါင်းတို့နှင့်အထက်၊ကန့်သတ်ထား၏အတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏။' တ္ခံုရှိသည်ပိုင်ခွင့်အငြင်းပွားမှုများအပေါ်အခြေခံ တန်ဖိုး(လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်စိဖိတ်အခြေချ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်း)သို့မဟုတ်အပေါ်အခြေခံင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစာချုပ်။ ၎င်း၏ျထို့အပြင်တစ်ခုအဖြစ်ပြုမူအ ပိုင်ခွင့်အာဏာများမရှိပါ။ ပြဿနာတွေပေါ်လာသည့်အခါ၌သတ္မွတ္ျ ေခုံအောက်ခုံသမာဓိစည်းမျဉ်း(ဥပမာသောကြောင့်ထိုပါတီတစျခုဖို့ငြင်းသတ်မှတ်သည့်ခုံ၊သို့မဟုတ်သည့်အခါသတ်မှတ်ထားသောအ. နိုင်ဖို့သဘောတူသတ်မှတ်၏တတိယခုံ)၊ ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်စေခြင်းငှါဖို့မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်အစေခံ ။ ဒီေရြးခ်ယ္မႈကလည္းခုံသမာဓိအခြားသဘောတူညီချက်များဖြစ်သည့်အတွက်၊ ျသတ်မှတ်ထားသည်။ အကြား ၂၀၁၁ နှင့် ၂၀၁၅၊၂၅၇၏ကဏ္ဍတင္ၿ။ ခုံနှစ်ခုအကြားပြည်ထောင်စုအရပ်ကိုကြာသောအခါနှစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စု၏အ ဆုံးဖြတ်တင်ပြရန်အငြင်းအခုံမှအ ဘီ။ ▲ပါဝင်ပါသည် ၅ ၊နှစ်အရာတို့အားဖြင့်စီပါတီမှ(နှင့်အဘယ်သူဖြစ်မည်အမျိုးသားပါတီစိုးရိမ်)။ အလေး ရွေးချယ်ပဉ္စမမြောက်နှင့်စက္ထဲခုံ။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအပေါ်ဥပဒေ၏အတွက်ထောက်ပံ့တစ်ဦးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းယန္တရားနှင့်ပတ်သက်ၾကာင္းနိမိတ်အရာအတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်စေအလျှင်နှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြကွဲပြားခြားနားသောအငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း၊တတိယရွေးချယ်မှုရန်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်သြဂုတ်လ ၂၀၁၆၊ ရှိအုပ်ချုပ်ခွင့် ၁၂ အမှုပေါင်းဆက္လုပ္တယ္ပြည်ထောင်စုအောက်နာက္ဆက္တြဲရန္နွအ ၊ထို့ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲလုံးကိစ္စများပျိုးလက်အောက်တွင်ဤနာက္ဆက္တြဲတစျခုမှလွဲ။ များစွာသောလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီပေးတဲ့ယန္တရားအကြားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်ပြည်နယ်များအားဖြင့်ခုံသမာဓိအားဖြင့်ဒါခေါ် ။ အ တစ်ကဏ္ဍများတွင်တရားစွဲဆိုအဖြစ် ေ၊အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်း၏ခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်အားပေးထောက်ခံမှုကိုအခုံမှု။.
အပိုဒ် ၂ အရှေ့နေများဥပဒေကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ မေ ၁၅၊၁၉၉၆၊သတ်မှတ်ရှေ့နေအဖြစ်'ကြပြီတဲ့သူပညာရှင်တစ်ဦးရရှိသောလေ့ကျင့်လိုင်စင်ဖြင့်တရားဝင်နည်းလမ်းများကိုဥပဒေကြောင်းအရ။' ရှေ့နေများကိုအရေးပါသောအင်အားစု၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အဆိုပါဥပဒေစနစ်အတွက်။ ဆောင်းပါး ၃ ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအကျင့်ရှေ့နေများမဖြစ်မနေလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်လိုက်နာမှုကျင့်ဝတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စည်းကမ်းများအတွက်ရှေ့နေ။ သူတို့အသုံးပြုမှုအချက်အလက်အဖြစ်အခြေခံ။ နှင့်ဥပဒေအဖြစ်အကိုက်အတွက်လေ့ကျင့်။ ၏မစ်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်ပါသည်အောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းချက်အတွက်သတ်မှတ်ထားပြည်နယ်ဥပဒေများဖြင့်အလေ့အကျင့်၏။ အပိုဒ် ၁ အရှေ့နေများဥပဒေအကြောင်းဖော်ပြထား၏မစ်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်ပါသည်ထိန်းသိမ်းရန်ဥပေဒအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားရန်ပါတီများ၏တစ်ဦးဝတ်စုံနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်လျော်သောအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ အဲဒီနှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်များမှာနှစ်ဖက်ဖြည့်စွတ်ကြောင့်အပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဥပေဒအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်ကိုက်ညီသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအမှန်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ တရုတ်ရှေ့နေကစားလွတ်လပ်သောအခန်းကဏ္ဍအတွက်တရားစွဲ။ သူတို့မပိုင်တရားရုံးသို့မဟုတ် ၊မဟုတ်သလိုသူတို့ပိုင်များကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်။ သူတို့တွင်ပါတရားစွဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏။ သူတို့လွတ်လပ်သော။ သူတို့ပျော်မွေ့သာအခြင့္အေ၏သာမန်သင်တန်းအတွက်တရားစွဲဆို၊ဒါပေမယ့်လည်းအခွင့်အလိုက်ဖက်နှင့်အတူစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များရှေ့နေ။ အလေ့အကျင့်များ၊ရှေ့နေများပထမဦးဆုံးရယူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများနှင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားပြီးနောက် သတ္မွတ္အ။ ပြီးနောက်ရရှိရေးအရည်အချင်း၊သူတို့လက်ခံရရှိအဆိုပါလိုင်စင်အတွက်လေ့ကျင့်နှင့်အညီဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနိုင်ရန်အတွက်အလေ့အကျင့်ဥပဒေအဖြစ်ရှေ့နေ။ သာထို့နောက်သူတို့မွေ့လျော်၏အခွင့်အရေးရှေ့နေယူဆနေစဉ်တာဝန်အညီ။ ရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းစီရရှိသောအရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံအတွက်ဥပဒေအလုပ်အကိုင်အဘို့အအချိန်ကာလ။ ဤသည်အဖြစ်လူသိများသည်အခြာ၏အရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရကာယလေ့ကျင့်။ အပိုဒ် ၆ ကိုရှေ့နေများဥပဒေကပေးတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ရယူများအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအရည်အချင်း:အမျိုးသားစာမေးပွဲသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သည္။ အဆိုအပိုဒ် ၆၊ျပည္နယ္ရမည်အုပ်ချုပ်ရေးအမျိုးသားစာမေးပွဲဆုံးဖြတ်ရန်မှရှေ့နေပညာအရည္အခ်င္း။ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူသုံးနှစ်ကောလိပ်ပညာရေးအတွက်ဥပဒေနှင့်အထက်သို့မဟုတ်ယင်းနှင့်ညီမျှသောအရည်အချင်း၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူတစ်ဘွဲ့အတွက်အခြားစည်းကမ်းနှင့်အထက်နိုင်၊ချီးမြှင့်ခံရသူများ၏ရှေ့နေရဲ့အရည်အချင်းအားဖြင့်အင္ငံေတာ္ေကာင္စီတရားအုပ်ချုပ်ပြီးနောက် ဖြတ်သန်းသား။' အပိုဒ် ၇ ထောက်ပံ့ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူတစ်လေးနှစ်ကောလိပ်ပညာရေးအတွက်ဥပဒေနှင့်အထက်တွင်ရှိသည်သောသူအတွက်စေ့စပ်ဥပဒေလေ့လာရေးနှင့်သင္ၾကိုင်အတန်းအတတ္ပခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်တူညီမျှအရည်အချင်းနှင့်သူများလျှောက်ထားအတွက်လေ့ကျင့်ဖြစ်ခွင့်ပြုရှေ့နေရဲ့အရည်အချင်းမှဘာသာရပ်အတည်ပြုချက်ဖြင့်အစိုးရကာင္စီသည္။ အပိုဒ် ၈ အရှေ့နေများဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုကြောင်းလျှောက်ထားအတွက်လေ့ကျင့်လိုင်စင်ကိုထောက်ပံ့ရပါမည်ခခံဥပေဒတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအောက်ပါလိုအပ်ချက်များ:အပိုဒ် ၉ ကဖော်ပြလျှောက်ထားသူများမဆိုနှင့်တွေ့ဆုံအောက်ပါအခြေအနေဖြစ်လိမ့်မည်အလြန္စိုးကျင့်ခွင့်လိုင်စင်:လျှောက်ထားရပါမည်ပထမဦးဆုံးတင်ပြတဆင့်၊သူတို့ရဲ့လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်အဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊အားလုံးလိုအပ်သောလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများမှဒေသခံသည္။ အဆိုအပိုဒ် ၁၀ ရဲ့ရှေ့နေများဥပဒေ၊အဲဒီစာရွက်စာတမ်းများသင့်ပါတယ်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:အဆိုပါဒေသခံသည္သင့်အဖိုးအတွင်း ၁၅ ရက်၏လက်ခံရရှိအ လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အစီရင်ခံခြင်းကိစ္စအားပြည်နယ်(ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသသာယာ)သည္။ ထိုသည္၏ပြည်နယ်များ၊မြူနီစီပယ်နှင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများရှိသင့်၊ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်း၊ဂရံေျမတစ်ဦးလေ့ကျင့်ဖို့လိုင်စင်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ရှေ့နေများဥပဒေအတွင်း ၃၀ လက်ထက်ကာလ၏ဲ။ ပျက်ကွက်သူများသည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်အလြန္စိုးလေ့ကျင့်လိုင်စင်နှင့်သင့်ကြောင်းကြား၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ရေးသားထားသောပုံစံကိုအတွင်း ၃၀ လက်ထက်ကာလ၏ဲ။ ရှေ့နေသင့်မှတ်ပုံတင်ရန်မိမိတို့အကျင့်ခွင့်လိုင်စင်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့လိုင်စင်များမမှန်ကန်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်သည္ထက္အနယ္စပ္မွာဗျူရိုမှာပြည်နယ်(နယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသ)။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊မှတ်ပုံတင်လည်းအချုပ်အားဖြင့်တရားဌာနခွဲမှာအဥ့္ကို(မြို့သို့မဟုတ်ခရိုင်)နှင့်အတူအဆင့်ခွင့်ပြုချက်မှအဆင့်မြင့်သည္။ အပိုဒ် ၁၂ အရှေ့နေ ဥပဒေကပေးတဲ့ရှေ့နေသင့်အလေ့အကျင့်မှာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီထက်မှာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုပြိုင်နက်တည်း။ မရှိပထဝီကန့်သတ်ဖြစ်သင့်။ အပိုဒ် ၁၃ ကဖော်ပြသည်လက်ရှိအစိုးရရုံးကိုင်ဆောင်သင့်သည်မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ရှေ့နေ။ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အမြဲတမ်းကော်မတီ၏ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်မှာအမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်၊ရှေ့နေမဖြစ်သင့်အလေ့အကျင့်။ အပိုဒ် ၁၄ ပေးတဲ့လိုင်စင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သင့်အလေ့အကျင့်အဖြစ်ရှေ့နေသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်ဖောက်သည်များအတွက်အမြတ်အစွန်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အတွက်တရားဝင်သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများမဖြစ်သင့်မိတ်ဖက်များအတွက်ပူးပေါင်းသို့မဟုတ်တစ်သမဝါယမဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ အပိုဒ် ၁၅၏ရှေ့နေများဥပဒေသည္၊'တစ်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်အကျင့်ဖွဲ့အစည်းများ၏ရှေ့နေနှင့်အခြေခံယူနစ်များ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေအလုပ်အကိုင်။ လေ့ကျင့်ရှေ့နေများကိုစေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်သူတို့အလေ့အကျင့်၏နာမ၌အဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ အရှေ့နေများဥပဒေအတွက်ထောက်ပံ့သုံးဘာသာများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊အစိုးရ-ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊သမဝါယမနှင့်ပူးပေါင်း။ ညီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယန္တရားခွင့်ပြုထားေ ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏အများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်သူတို့ယူဆကွဲပြားခြားနားဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရားများ(ပြည်တွင်းပေးရန်တာဝန်)။ အပိုဒ် ၁၆ ကဖော်ပြသည်ပြည်နယ်-ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများသင့်အလေ့အကျင့်နှင့်အယူဆပေးရန်တာဝန်နှင့်အတူအားလုံးသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ အပိုဒ် ၁၇ ကြောင်းပြောပါတယ်ရှေ့နေများဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်သမဝါယမဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ယူဆပေးရန်တာဝန်နှင့်အတူအားလုံးသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ အပိုဒ် ၁၈ေျပာတဲ့ရှေ့နေများဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်ပူးေဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်ယူဆန့်အသတ်နှင့်ပူးတွဲပေးရန်တာဝန်များအတွက်မိမိတို့ကုမ္ပဏီ။ အာတီကယ္ ၁၉ ကဖော်ပြသည်အနက်တစ်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသင့်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပဳသည္မှာပြည်နယ်(ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသသာယာ)အဆင့်သို့မဟုတ်အထက်နှင့်လိုင်စင်သင့်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ရန်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များကိုဤဥပဒေအတွင်းရက်ပေါင်း ၃၀ လက်ခံရရှိသည့်လျှောက်လွှာ၏ပျက်ကွက်သူများသည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်အလြန္စိုးကျင့်ခွင့်လိုင်စင်နှင့်အဖြစ်အကြောင်းကြားဆုံးဖြတ်ချက်အတွင်းရက်ပေါင်း ၃၀ လက်ခံရရှိ၏။ ဆောင်းပါး ၂၀ ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဥပဒေတွင်ကုမ္ပဏီများသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်တက်ဌာနခွဲရုံးမှဘာသာရပ်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဒေသခံသည္၏ပြည်နယ်(ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသမိႈ)အဘယ်မှာရှိဌာနခွဲရုံးသည်ဖြစ်။ မိဘဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောယူဆသင့်ပါတယ်ပေးရန်တာဝန်များအတွက်သူတို့ရဲ့ဌာနခွဲရုံး။ အပိုဒ် ၂၁ ပြည်ထောင်စုသောဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများသင့်အခွေကိုမည်သည့်အပြောင်းအလဲတချို့၏အမည္၊တည္ေနရာ၊ဆောင်းပါးများကိုအများအသင်းနှင့်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အယူအတည်ပြုချက်သည္။ အပိုဒ် ၂၃ ပြည်ထောင်စုကြောင်းရှေ့နေသင့်ဆောင်ရွက်ရန်စီးပွားရေးအားဖြင့်သူတို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊သင့်သောအရေးစာချုပ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၊တာဝန်ခံသူတို့အခကြေးငွေနှင့်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊စံချိန်တင်အခကြေးငွေသစ္စာသို့စာအုပ်များ။ အပိုဒ် ၂၄ ပြည်ထောင်စုသောဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ရှေ့နေမဖြစ်သင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ၏လုပ်ရပ်မျှၿစစ္သည္ေတြအခြားရှေ့နေသို့မဟုတ်ပေးဆောင်ကော်မရှင်အပေါ်ရည်ညွှန်း။ ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြောင်းခံယူပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာရည်ရွယ်ဖုမည်သည့်လင့်ခ်နှင့်အတူအစိုးရဌာန။ ရင္ငံေတာ္ေကာင္စီသတိထားမိ ၂၀၀၀ ။ ၅၁ အခြာ၏အခံအဖွဲ့အစည်းအတွက်စေ့စပ်ရေးလက်မှတ်မှ အစိုးရဌာနနှင့်အန္ႀကီးဌာန၏တရားသတိထားမိအခြာများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီနှင့်ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့အစည်းမှအစိုးရရုံးများ၊အောက်ပါအမျိုးအစားများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများသင့်ပြဌာန်းသူတို့ရဲ့လင့်ခ်နှင့်အတူအစုိးရပြီးနောက်ဖုဆက်ဆံနှင့်အတူအစိုးရရုံးများ၊ဤဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများဖြစ်သင့်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်သမဝါယမဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများမရှိတော့သူများနှင့်အတူအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အစည်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း။ သူတို့သည်နောက်တဖန်မခံစားခွင့်ထူးနှင့်အတူဆက်စပ်အဆင့်အစိုးရရုံး။ -ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဥပဒေကိုကုမ္ပဏီမဖြစ်သေးသောသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်နှင့်အရာများမှာနေဆဲအပေါ်သို့မှီခိုပြည်နယ်ထောက်ပံ့မည်မဟုတ်တွင်ပါအခြာအစီအစဉ်။ အဓိပၸါယ္နှင့်စွန့်ပစ်ပြည်နယ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်၏နိယာမ"အကြင်နှီးမြှုပ်နှံပိုင်ဆိုင်အိမ်ခြံမြေ။"သေချာအောင်နေစဉ်၊အဓိပြည်နယ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို၊မူဝါဒကြာအကောင့်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်အတူသူတို့၏ဥာဏ်ပညာဖြင့်အလုပ်လုပ်။ အရရှေ့နေများဥပဒေ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊အရပ်ဘက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေ၊အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ရှေ့နေခံစားအောက်ပါအခွင့်အရေးနှင့်ယူဆအောက်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများ။ အပိုဒ် ၁၊အပိုဒ် ၃၇ အရှေ့နေများဥပဒေ၊'ဘားအသင်းအဖွဲ့များမှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများခံစားအဆင့်အတန်းများ၏တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း။ သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စည်းကမ်းအလောင်းတွေ၏ရှေ့နေ။' အပိုဒ် ၂၊အပိုဒ် ၃၇ ပြည်ထောင်စုသောတရုတ်အမျိုးသားအကူအတည်လိမ့်မည်အမျိုးသားအဆင့်နှင့်ဒေသခံဘားအသင်းဖွင့်ထားမှာပြည်နယ်(ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသသာယာ)အဆင့်ဆင့်။ မြို့နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောခရိုင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်တက်ဒေသခံဘားအသင်းအဖွဲ့လိုအပ်ခဲ့လျှင်။ အပိုဒ် ၂၊အပိုဒ် ၃၉ ပေးတဲ့ရှေ့နေများမဖြစ်မနေပူးပေါင်းဒေသခံတစ်ဦးဘားအသင်း။ သူအရှေ့နေများ၏ဒေသခံတစ်ဦးဘားသင်းအဖွဲ့များမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်များအမျိုးသားအကူအညီ။ နှင့်အညီဖွဲ့စည်းပုံအသင်းအဖွဲ့၊အဖွဲ့ဝင်ခံစားခွင့်နှင့်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်။ ထိုအဆိုအမှုကျင့်ဝတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တော်ရှေ့နေများသည်အမွေးအပေါ် အောက်တိုဘာလ ၆၊၁၉၉၆ အားဖြင့်တရုတ်အမျိုးသားဘားသင်းအဖွဲ့များ၊ရှေ့နေများ-အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၏တရားမျှတမှုအပေါ်အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊၁၉၉၂ ခုနှစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဘို့အပြစ်ဒဏ်သူဖောက်မိမိတို့၏ကျင့်ဝတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ သည္ထက္ရင္စု၊မြို့နှင့်ခရိုင်အဆင့်သင့်ဘက်တော်သား။ ဥပဒေရေးရာစည်းကမ်းကော်မတီတည်ထောင်သင့်ပါတယ်တွင်းတို့သည္ကိုပြဋ္ဌာန်းရန်။ အဖွဲ့ဝင်များ၏အကာ္မထည့်သွင်းသင့်လေ့ကျင့်ရှေ့နေ၊ရှေ့နေများ'အသင်းအဖွဲ့နှင့်တရား။
ရှေ့နေတစ်ဦးအမွေဥစ္စာအားဖြင့် မေးခွန်းတွေအပေါ် ကိစ္စများကိုဖုံးတစ်အပိုင်း၏ပြည်တွင်း၊ထိုကွောငျ့၊အမွေတရားရုံးကအမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်အခက်ခဲဆုံးတဦး၏အလေ့အကျင့် ရှေ့နေ။ ထိုတရားရုံးများကထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါအမွေအငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းကြသည်အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုအမည်မဲ၊အသိအမှတ်ပြုမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့်အမွေဥစ္စာကို၊ပြန်လည်အဆိုပါနောက်ဆုံးရက်များအတွက်အမွေဥစ္စာ၊ဌာနခွဲများ၏အမွေဆက်ခံခြံမြေများထဲတွင်အမွေ၊ဆောင်ချက်ကိုအများလက်ခံသောအမွေဥစ္စာနှင့်အားလုံး၏ဤပြဿနာများ၏အမွေဥစ္စာအားဖြင့်လိုက်ရှေ့နေနှင့်အပ္ထားေသာတရား။ အစိတ္အစီရှေ့နေအမည်အလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်၏အမွေဥစ္စာကိုမသာတရားရုံးဒါပေမယ့်လည်းကွပ်မျက်အတွက်တစ်ဦး၏လက်မှတ်၏အမွေဥစ္စာအယူႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါရှေ့နေအားဖြင့်အမွေပေးလိမ့်မည်ဆောင်းခြင်းအဘို့အစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အရယူလက်မှတ်များ၏အသင်းအတွက်အမွေအယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်အတွက်အများဆုံးအဆင်သင့်အကြားအငြင်းမွေအဘယ်သူမျှမဆက်ဆံရေးအဘယ်သူမျှမလိုအပ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့သတ်မှတ်ကြသည်မဟုတ်လွဲချော်၊အနှိုးအဆော်၏စာရွက်စာတမ်းများပြီ။ လျှင်ထိုအစိတ်အပိုင်းပျောက်အမွေဥစ္စာ-ရိုးနယ္စပ္မွာလုပ်ငန်းစဉ်လည်းရှောင်ရှားမရနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့သိသိသာသာထောက်ခံသူများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ရှေ့နေနှင့်အတူကိစ္စရပ်များကို၏အမွေဥစ္စာမြို့တော်အတွက်၊ထိုအဖြစ်အပျက်၏အမွေဥစ္စာ၊လက်ခံမှုအမွေဥစ္စာကို၊၏ရှယ်ယာ၏ဘိုးဘွားအရာ၊စသည်တို့ကို။ ဿုံအားလုံးသိမသာကွဲပြားအများတရားစွဲဆိုခြင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများအားဖြင့်အမွေဥစ္စာဖြစ်ကြထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏လယ်ပြင်တွင်အငြင်းပွားပတ်သက်။
သငျသညျအထဲက အိမ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ပွဲအတွက်လနှင့်သင်နောက်ဆုံးတွေ့ရှိပါတယ်ပြီးပြည့်စုံသော။ အခြံမြေနှင့်အိမ်နီးနားချင်းခံစားအတိအကျသင်တို့အဘို့အမှန်သည်။ ရောင်းသူရှိပါတယ်အစ်းႏႈန္းနဲ့အခုအချိန်သင်တို့အဘို့အစေရန်တစ်ဦးလေလံအပေါ်၊ရောင်းသူဒါပါပဲသိတယ်သည့်အနက်စိတ်ဝင်စား။ သင့်ရဲ့လေလံအားနိမ့်နိုင်ပါတယ်၊တူညီသောအ၊သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ထက်ပင်ထိုအမေးစျေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးဈေးကွက်အခြေအနေ။ ဤသည်၏အစအဦး စေ့စပ်ဆွေးနွေးမယ်၊အကြောင်းအဘို့အပေါ်သွားများအပြားလည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊သင်ရောင်းသူအပေါ်သဘောတူအဘိုး။ အခုအချိန်မှသွား။' အချို့အေးဂျင့်မခေါ်ဒီ'အောက်ကန်။' တစ်ဦးအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူစာချုပ်ချုပ်လည်းဖြစ်လူသိများစာချုပ်ဝယ်ယူအိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်လူနေအိမ်ဝယ်ယူသဘောတူညီချက်သည်အနှောင်၊စ္ႏကြားသဘောတူညီချက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။ သူတို့အသီးအသီးရှိဥပဒေကြောင်းအစြမ္းအစေဝယ်ယူ၊လဲလှယ်ခြင်း၊သို့မဟုတ်အခြားအနင်း၏အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မေးခွန်း။ အဆိုပါစာချုပ်အပေါ်အခြေခံဥပဒေရေးရာ'ထည့်သွင်းစဉ်းစား။' ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်အကြင်အခြင်းဖလှယ်အတွက်အိမ်ခြံမြေနှင့်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်စအခြားပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အဂတိလုပ်ဆောင်ရန်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဖို့ကတိပေး။ အ ။။ တ္တလိမ်လည်လိုအပ်သောအိမ်ခြံမြေကန်ထရိုက်စာချုပ်များအတွက်ဖြစ်ရပါမည်အရေးအသားသို့မဟုတ်မတည်။ သူတို့အေကလက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်နှစ်ဦးစလုံးအဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူ။ များမှာအတိတ်၏အရာတစုံတခု။ ကိုတင်းပလိတ်များနှင့်များ၏ပုံစံများရရှိနိုင်ပါသည်ဒါပေမယ့်စဉ်းစားတိုင်ပင်အတွေ့အကြုံအိမ် စိတ္အရှေ့နေသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နေတာပါလျှင်သင်ကိုင်တွယ်အရောင်းအဝယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ များ၏စာရင်း ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါအဝယ်နိုင်ရရှိရန်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အပေါင်ခံ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပါဝင်သည်ရတဲ့အကဲဖြတ်နှင့်ဤမကြာခဏလိုအပ်သောအပေါင်ခံသည့်ကုမ္ပဏီ။ ဒါကြောင့်လည်းပါဝင်သည်ရှိခြင်းတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေး။ တစ်ခါတစ်ရံအခြားရာင္းနေရာယူရမယ်ပိတ်ဖို့နိုင်မီ'ငါငါအိမ်ရှေ့၌ငါဝယ်ခြင်းငှါတတ်နိုင်။' အသိုက်များသောအားဖြင့်လုပ်သည့်အခါဝယ်လက်မှတ်ထိုးစာချုပ်။ အဆိုပါငွေသည်ထိုအခါ၌ကျင်းပ ပိတ်ပွဲသည်အထိတစ်တတိယပါတီအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အရောင်းသူရဲ့အိမ်ခြံမြေရှေ့နေသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်ကုမ္ပဏီ။ အသိုက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်တစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ရောင်းဈေးနဲ့ပမာဏကိုဖြစ်သင့်သည်စာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထား။ ဒါဟာအကြွေးရှိတဲ့အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းဝယ်ယူစျေးနှုန်း။ ဤသည်အလေးအနက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးရလဒ်အတွက်ကိုယ်အသိုက်များ၏၊သို့မဟုတ်ပိုဆိုး၊အသိမ်းခံရတရားစွဲအတွက်တိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်ပြီးစီး၏။ နေမယ်ဆိုရင်ဝယ်ပြီးသင်ခံစားရကြောင်းသင်ထွက်ရရမယ် အ၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးထိုသို့ပြုမှအစဉ်ကာလအတွင်းအချိန်အခါကာလ လျက်ရှိသည်။ စာသားအလွတ် ။သူတို့နိုင်သည်ဖြစ်တရားဝင်အသုံးပြုပေမယ့်မရှိရေးပေါ်အဘို့တစ်ရိုးရှင်းသောအမှု၏အအေးခွကေို။ အသုံးအများဆုံး'ထဲက'ဖြစ်ပေါ်ကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များ။ ကြိုးစားလျှင်ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌ရအပေါင်ခံခြင်းနှင့်သင်ပယ်ချခဲ့၊ထိုစာချုပ်သည်သိမ်း၊နှင့်အဘယ်သူမျှမအမှားမှာ။ အများစုကအမှုအရာအတွက်မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ အာမခံချက်မရှိပါင်တစ်ဦးကဝယ်လိမ့်မည်အမှန်တကယ်ပေးတဲ့ချေးငွေလို့ဖြစ်ရဲ့အကြို-အတည်ပြုပြီးအားဖြင့်တစ်ဦးပေးသော။ အခြားဘုံ'ထဲက'အဆးေတစ္ဝက္ပဲ။ ထိုစစ်ဆေးခြင်းတက်လှည့်ယွင်းပြီးသူတို့နီးပါးအမြဲအားလုံးပြုလျှင်ဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်အဲဒီချို့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းအလွန်အကျွံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်၊ပါတီပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်အကယ်နိုင်ပါဘူး။ဗပတ်သက်ပြုပြင်။ အဘယ်သူမျှမအမှားမှာ။ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများ၊အိမ်ဆာင္ရြက္သည္ပြီးကြိုတင်မဲအတွက်ကွပ်မျက်၏အပြီးသတ်ဝယ်ယူစာချုပ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးစစ်ဆေးစေခြင်းငှါမ တစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းသွင်းတစ္ဝက္ပဲ။ အချိန်၏အရေးအသား၊မြန်မာ ၊ ၀၀၆၉၇၀၀၆၊တစ်ပွဲ-တွဲမှာ عینک آفتابی زنانه ليون အတွက်အိမ်ခြံမြေအ ၊ကယ်လီဖိုးနီးယား။
အဆိုပါမေးခွန်း၏ဝယ်ယူ သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမဆိုအိမ်ခြံမြေအလွန်အလေးအနက်။ အဲဒါကိုလိုအပ်ခံရဖို့ပြင်ဆင်ထားနှင့်အတူအားလုံး နှင့် ။ အလွန်မကြာခဏ၊လိမ်လည်မှု၊လိမ်လည်နှင့်အရှင်၏လာတဲ့ပြဿနာတွေထသောအတိအကျနှင့်အတူလုံခြုံရေးအိမ်ခြံမြေအပေါ်။ ကျနော်တို့စုဆောင်းဖို့လိုအပ်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ရောင်းဖို့။ ဒီလိုပြပွဲတွေအများကြီးအာရုံစိုက်တွေအများကြီးဖြုန်းကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အချိန်။ ကုန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးချင်းစီအမှတ်အသေးစိတ်အတွက်၊ပိုကောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘယ်အားလုံးအတူတူလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရောင်းချ၏။ ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းများကိုအတည်ပြုချက်ကိုအခြံမြေပိုင်ဆိုင်သည်၊နှင့်သောသင်တိုင်းမှန်ရောင်းဖို့အခြေခံပေါ်မှာဤစာရွက်စာတမ်းများ၏။ ရေအတွက်ကိုပေါ်မူတည်၏ရာင္းခ်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေ၊ခွဲဝေချထားပေးရန်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းအခြင့္အေ။ ပိုက္ဆံမ်ားဒီကနေ၊ထိုတူညီသောခွဲခြားသို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်။ အကယ္တုိက္ခန္းခဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့တစ်ဦးချင်းပိုင်ဆိုင်မှုမှအပင်သာယာစီးခ်ဳပ္မ်ားအားဖြင့်၊ထို့နောက်တစ်ဦး၏လုပ်ရပ်လွှဲပြောင်းရေးဆွဲတက်သည်။ အပျက်အတွက်အ အိမ္ရာခံခဲ့အားဖြင့်အမွေဥစ္စာအားဖြင့်၊ထိုအက်ဥပဒေ၏လက်ဆောင်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်အဆိုပါ၏ရလဒ်အဖြစ်ငွေပေးချေ၏၊ထိုအခါသက်ဆိုင်ရာစာတမ်းလိုအပ်သည်။ အကယ္ခံေျမခံခဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်၊ထို့နောက်သင်လိုအပ်ပေးစေခြင်းငှါတစ်ဦး၏လက်ဆောင်။ အခါတုိက္ခန္းသည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်များကယခင်ပိုင်ရှင်များ၊ဒါကြောင့်လည်းလိုအပ်ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းစာချုပ်။ လဲလှယ်သည့်အခါ၊တစ်ဦးဖလှယ်သဘောတူရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်၊အရာအတည်ပြုအခြင့္အေ။ ဖြစ်ရပ်အတွက်တရားစွဲမှု၏၊ညာဘက်အဖို့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအားဖြင့်လုံခြုံ၏ပြုမူသောတရားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ခြံမြေများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်မည်အတွက်။ အခြားစာရွက်စာတမ်းများလည်းအမွေဥစ္စာကို၊နှစ်စဉ်သို့မဟုတ်လိမ့်မည်။ ပါကတုိက္ခန္းအဆိုပါစွန့်ပစ်ခြင်းမှာအငှားပြီးတော့၊လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရောင်းချနေများအတွက်တိုက်ခန်းများသူတို့ရှိသည်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ပျက်ကွက်။ လည်း၊အဆိုပါပိုင်ရှင်၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုယူရန်လိုအပ်သည်လက်မှတ်တစ်ခုအနေဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအားလုံးအသိုင်းအလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများပေးဆောင်နေကြ(င့္ထူးချွန်အကြွေး)။ ထို့အပြင်ထုတ်ပြန်လက်မှတ်များမရှိခြင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်အတုိက္ခန္း အိမ်ငှား(ရောင်းချခြင်း၏အချိန်မှာ)။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဆုလက်ဆောင်သို့မဟုတ်အမွေဥစ္စာ၊လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ငွေပေးချေမှုအခွန်များထောက်ပံ့နေကြတယ်။ အ အယူရန်လိုအပ်သောကြောင့်အ ကူးလက်မှတ်၊စီးပုံစံ ။ ၁၁ င့္တုိက္ခန္းစီပြောင်းရွှေ့ဖို့စက္ကူ။ အ ကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီးမှသာထွက်တင်ဆောင်လာသောလုံးအတိုင်းအတာ။ပစၥည္း၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အချုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပိုင်ကနေစုစည်း၏ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းများ-ရန်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်များရောင်းချ။ပါကရောင်းသူသည်တရားဝင်လက်ထပ်၊ပြီးတော့ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတြက္အျခွင့်ပြုချက်အဘို့အရောင်းချခြင်းများ၏ပူးတွဲပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု။ ချွင်းချက်ကအဲဒီကိစ္စဆိုရင်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခဲ့ခြင်း၊နောက်လက်ဆောင်သို့မဟုတ်အမွေဥစ္စာ။ အကယ္ပိုင်ရှင်တွေအရွယ်မရောက်သေးသည့်သားသမီး၊ထို့နောက်ဤကိစ္စတွင်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်လိုအပ်သောရောင်းချခြင်းအတုိက္ခန္းဖြစ်ကြောင်းဖြည့်စွက်အားဖြင့်တစ်ဦးထံမှလက်မှတ်အသွားဏာသို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့၏ဂေါပ။ ဈေးကွက်တန်ဖိုး၏အိမ်ခြံမြေများတွင်ညွှန်ပြလျှင်အအိမ္ရာ ဝယ်ယူခဲ့သည်အောက်တစ်ပေါင်နှံ။ ဒီသင်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ၏အရာျဖတ္ကိုသူအစုံကုန်ကျစရိတ်၏၊ပြီးတော့တစ်ဦးမှထုတ်ယူသည်အားထုတ်ကာ၊အရာသင်လိုအပ်ပေးရန်ကိုဘဏ်နှင့်အာမခံကုမ္ပဏီ။ စုဆောင်းစာတမ်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်။ ကျနော်တို့စုဆောင်းဖို့လိုအပ်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ရောင်းဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီး။ ပြီးလုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်သောဘဏ္ဍာရေးစစ်ဆင်ရေး။ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဆက်စပ်ပြဿနာများ၏ရောင်းမည်၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအသွယ်အ ဤမေးခွန်းနှင့်အတူ။ ရထံမှအကြံဉာဏ်များကနေအတွေ့အကြုံအထူးကု။.
ဤစာရင်းပြုစုခဲ့ကြသဖြင့်ဗြိတိသျှသံရုံး၊မြင့်မြင့်ကော်မရှင်နှင့် ။ နိုင်ငံခြား နယ်ရုံးပေးအားဖြင့်ဤစာရင်းများအပေါ်နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးလို့မယူဆသို့မဟုတ်ဆောင်ရွက်ရန်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာတာဝန်၊၊ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထိခိုက်နစ်နာယူဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအကောင့်သို့အခါနတ်တို့ကိုဒေသခံရှေ့နေ။ အဆိုပါ မလက်ခံရန်မည်သည့်တာဝန်ကိုမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်မည်သည့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်၏အသုံးပြုမှုကိုမှဤအချက်အလက်ထံမှသို့မဟုတ်မည်သည့်ပြတ်ပေးစေ။ ကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်ထားသည်များကိုဗြိတိသျှနိုင်ငံသားနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အကူအညီသူတို့ကိုပိုကောင်းစေပြီးအသိဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမကြံပြုချက်များနှင့်ထိုသို့သောအဖြစ်ဆက်ဆံသည်။
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာ အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ဒါကြောင့်အပေါ်တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မည်ဆိုက်တိုင်းနီးပါးပါဝင်၏စျေးကွက်၏ဥပဒေကြောင်းအရ။"ကျယ်"အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်သည်မကောင်း၊မကောင်း။ အများအားဖြင့်၊ဒီအပိုပြီးများတဲ့စျေးကွက်ဖော်ခြင်းထက်အမှန်တကယ်ဝန်ဆောင်မှု။ သင်လေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ညာဘက်စိတ်သဘောထားကိုဤဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ဘာဖြစ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတူအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်. ဘာမှမ၊စည်းကမ်းအဖြစ်။ အတူအသိလျှင်ကျနော်တို့အကြောင်းစကားပြောနေကြသည်နေ့စဉ်အခြေအနေများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွား၊နှင့်အပြည့်စုံနှင့်အရည်အသွေးများ၏ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ကိုစိတ်ဝင်စားမဖြစ် တစ်စိတ်ကူးတိုက်၏အခြေအနေ၊ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။။။ ။ ကိုယ့်လိုအပ်ရန်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါသည်ဒီ။ ဒီမှာအများကြီး: မနေ့က သို့မဟုတ်တောင်မှလက်ရှိ ကျောင်းသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်"စုပ်"သူတို့ရဲ့သီအိုရီအသိပညာ၊ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအတွက်"အမှု"အဖြစ်အားကစားအတွက်၊တစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ပြိုင်ဘက်သင်ပေးသည်ထက်ပို ၁၀၀ လေ့ကျင့်ခန်း; မည်သည့်အစပြုတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း၊နှင့်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုလုပ်သောအထက်အခမဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါတယ်; တိုင်းပြည်အတွက်အမြဲတမ်းလာရြးေကာက္ပြဲမဲဆွယ်၊နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည်များအတွက်နိုင်ငံရေးသမားများ မစ္ဆန္ဒ၏ျပည္နယ္လႊတ္ေရန်ခဲယဉ်းသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရှေ့နေအဖြစ်-အနေနဲ့ချွင်းချက်-အဆင်သင့်ရှာတွေ့ဖို့တစ်မိနစ်မှရေးသားချက်များသင်ဖို့အရှုပ်ထွေးတဲ့မေးခွန်းနှင့်အပေးပညာရှိအကြံဥာဏ်ပေးတော်မူမည်ကြောင်းဦးတည်ချက်ဖြေရှင်းရန်ပြဿနာ။ ကျနော်တို့၊အများအပြားကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာအတွက်စေ့စပ်မရတရားဝင်အလုပ်လက်အောက်တွင်၏ပုံစံအတွက်"ဘုံ"ကောင်းသော၊သို့သော်ထိုသို့ပစ်မှတ်ထားနိုင်ဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစံ။
တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဗမာထဲတြင္ဥပေဒ အရည္အေဝင်း၏မှတ်တမ်းဖန်တီးပြီးအောက်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ဆောင်ရွက် ၂၀၀၅။ ဒါဟာအပေါ်၎င်း၏အခံေျမ၊ဘဏ္ဍာရေးဌာနနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလူမႈဝန္ထမ္းလူသူကင်းမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်မိမိတို့အဘို့။ တရားရုံး၏အကွယ်မှအရုံးတွင်သခင်ၽႊန္းခဲ့သောဟုအမည်ပြောင်းတရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ၁၉၄၇။ ၎င်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှဆင်းသက်လာနှစ်ဦးစလုံးအ ၁၈၉၀ ၽႊန္းၿပီးႏဆာင္တတ္သည္ ၏၁၃၂၄၊ေကရာဇ်အာဏာပိုင်ကျော်၏'နယ္တြင္း'နဲ့။ တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ကြပ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှု၏အခြံအဘယ်သူတစ်ဦးချင်းစီနိုင်ခြင်းရှိကြ၏စီမံခန့်ခွဲရန်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရေးရာ၊အားဖြင့်အကြောင်းပြချက်များ ၏စိတ်ကိုသို့မဟုတ် ။ ဒါဟာတစ်ဦး၏ရုံးခန်းအကြီးတန်းတရားရုံးများ၏အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့်ဝေလနယ်၊နောက်ပိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ကစိတ်ကျန်းမာရေးအက်ဥပဒေ ၁၉၈၃။ အဲဒီအချိန်ကအရွယ်တရားရုံး၏အကွယ်အပိုင်းအဟောင်းရုံးအများပြည်သူ၏အုပ်ထိန်းသူအသစ်တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အများပြည်သူထိန်းသူအခုလုံးဝသီးခြား အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနား။ အစောပိုင်းကတရားရုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဆက်ဆံနှင့်အတူသီးသန့်ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များ၊ဒါပေမယ့်အသစ်တရားရုံး၏အကွယ်ခဲ့သည်ခွင့်ပြုအင်အားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချောင်ချိမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူအင်အားအဖြစ်တရားရုံး၏။ တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အင်အားများမှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ဆောင်ရွက်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်အမိန့်များခင်အားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဥပေဒ ၂၀၀၅(ဘွဲ့နှင်းသဘင် ။ ၂)၂၀၀၇ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းအကွယ်ခဲ့ကြတည်ထောင်နိုင်ရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏မိသားစုဌာနခွဲမှတစ်ဆင့်တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ၂၀၀၇။ အရုံးနှင့်အပြည့်အဝ-အချိန်၏တရားအတိုင်းအကွယ်ခဲ့ကြမူလကမှာတည်ရှိအိန္ဂ်ယ္လ္မျှော်စင်၊လမ်းဆုံလမ်းမ၊လန်ဒန်က။ကတည်းက၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂ တွင်၊တရားရုံးတည်ရှိတဲ့အတွက်သောမတ်စ်ခ်ည္ေအဆောက်အဦမှာတော်ဝင်တရားရုံး၏တရားမျှတမှုအပေါ်နား၊လန်ဒန်က။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ကပြောင်းရွှေ့ဖို့ပထမဦးဆုံးရိပ်သာအိမ္၊၄၂-၄၉ မြင့် ၊လန်ဒန် ၁ ၉။ နောက်ပိုင်းအဖြစ် ၂၀၁၇၊ သမ္မတကိုတရားရုံး၏အကွယ်ခဲ့သည်ဘုရားဂျိမ်း ၊သူလည်းသမ္မတ၏မိသားစုဌာနခြဲ၊ဒု-သမ္မတကြီးဆာဝီလျံချားလ်စ်။ တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အာဏာရှိပါတယ်လျှင်ဆုံးဖြတ်လူတစ်ဦးကင်းမဲ့စွမ်းရည်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်မိမိတို့အဘို့၊ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်အရာကိုလုပ်ရပ်တွေအတွက်ယူမိဖို့လူတစ်ဦးရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုး။ တရားရုံးအာဏာရှိ ပေါ် လွှတ်ခြင်းအခွင့်၊ပါဝင်သောဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏လွတ်လပ်သူကျော် ၁၆၊ကင်းမဲ့စွမ်းရည်မြှင့်၊နှင့်အိမ်မှာနေထိုင်နေ။ တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အာဏာရှိပါတယ်ကည္ႏဒုတိယ၊နိုင်သူဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ကိုယ်စားသူဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူမရှိခြင်း။ အာဏာအရာရှိဒုတိယအခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်အခန်းကဏ္ဍအသက် ၁၅ မှ ၂၁၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ဆောင်ရွက် ၂၀၀၅။အပိုင်း ၁၅ မှ ၂၁ တွင်ကာဒစ်ဖ်တက္ကသိုလ်ကတိပြုသောဒုတိယအများဆုံးခန့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အရေးပါမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ဆောင်ရွက် ၂၀၀၅ ခွင့်ပြုသည်ပုဒ်မများကိုပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေ။ သို့သော်၊ဝင်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဖြစ်စေဤဆုံးဖြတ်ချက်၊နှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားမကြာခဏငြင်းပယ်အောက်ပိုင်း ၅ နှင့် ၆ အပိုင်းကိုစွမ်းရည်မြှင့်လုပ်ဆောင် ၂၀၀၅။အပိုင်း ၅ နှင့် ၆ တို့တွင်အ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအခန်းကဏ္ဍအတရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်တာဝန်ရှိသည်သတ်မှတ်ရာတွင်အငြင်းပွားမှုများမှအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းင့္က်က္ျ၏ရှေ့နေများ၊နှင့်ရေရှည်တည်တံ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှေ့နေ၊ သစ်ဂေါ၊ ဒုတိယမံခန့်ခွဲရေးရာအရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူအစိတ်စွမ်းရည်အောင်သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်၊ အချို့နှင့်အောင်ပြဋ္ဌာန်းကော။ ဥပမာပုဂ္ဂိုလ်ရေးချောင်ချိရေးကိစ္စများဆုံးဖြတ်သည်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်များမှာအကြောင်းရပ်ကာကွယ်ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှင်သော၊အဘယ်သူသည်သူတို့အမြင်နှင့်မည်သို့သူတို့အဘို့သာဂရုစိုက်။ နောက်ပိုင်းသတင်းထောက်ခရစ္စတိုဖာဆမ်ရှိရေးဆောင်းပါးများ၏စီးရီးအတွက်နေ့စဉ်နန်းဝေ၏တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ သူဟုခေါ်ခဲ့သည်တရားရုံးကို'အများဆုံးညစ်ယုတ်'နဲ့'အများစုလျှို့ဝှက်'တရားရုံးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်။ ဆမ်ရင်ခံများအပြားဖြစ်ပွားသက်ပါရန်ကြဖို့အတင်းအဓမ္မလက်ကျော်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို လူမှုရေးလုပ်သားများနှင့်အနားက်င္းပ။ အဆိုပါတိုးမြှင့်ပမာဏ၏တရားရုံးကျော်ကာလ ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၂ ဦးဆောင်အရှည်အတွက်နှောင့်နှေးအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်များပါဝင်သောဘဏ္ဍာရေးဘာသာရပ်များ၏ဝင်း။ အဆိုပါကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောနှောင့်နှေးကြဖို့ဦးဆောင်ဝေ၏။ အတွက် ၂၀၁၅၊တရားရုံးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအုပ်ချုပ်သောအမျိုးသမီးနှင့်အတူအခြောက်ကလေးများနှင့်အိုင်ကျူ၏၇၀ဖြစ်သင့်ပိုးကြောင့်နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တဲ့'ကသိသိသာသာအသက်အန္တရာယ်အဖြစ်အပျက်'အတွက်သူမ၏နှင့်သန္ဓေကြောင့်ရှိခြင်းဟာအလွန်ပါးလွှာသောသား။.
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အပေါ်အိမ္ရာကိစ္စများ အခါသင်သိဘယ်တော့မှမစေခြင်းငှါနေရာလေးကိုအတွက်လာချက်ချင်းဥပဒေရေးရာအကူအညီအပေါ်အိမ္ရာကိစ္စ၊အခြေအနေကိုအံ့သြသွားစေခြင်းငှါ။ ၏သင်တန်း၊အထွက်ရှာဖို့တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားသေးငယ်သည့်မေးခွန်းအပေါ်အိမ်ရာအခြေအနေများ၏တရားဝင်သဘာဝ၊ကျွန်တော်တို့အများစုကဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ဆပ်ဖို့အဘို့ဤဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်တစ်နေရာရာကိုသွားဖို့ဧည့်ခံ။ ထွက်ရှိပါတယ်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အပေါ်အိမ္ရာကိစ္စရပ်များကိုအွန်လိုင်းအဓိကအရင်းအမြစ်။ ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအလွန်အမင်းအရေးပါလှည့်အမှု၏မျက်နှာသာအတွက်ဤသိုသောအပေါ်မူတည်။ သို့သော်၊သင်သွားမီအထူးကုနှင့်ဖြေရှင်းရန်ထိုကိစ္စကိုအသေးစိတ်အတွက်၊ဒါကြောင့်ပိုကောင်းသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊အိမ္ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေ။ လောလောဆယ်၊ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များဆက်ကပ်အပ်နှံရန်အိုးအိမ်နှင့်များစွာသောအခြားဥပဒေနှင့်အားလုံးနီးပါးကသူတို့ကို၏အခွင့်အလမ်းရရှိရေး၏ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အပေါ်အိမ္ရာကိစ္စရပ်များကိုအွန်လိုင်းလုံးဝအခမဲ့။ ရှေ့တော်ပြေးမှရှေ့နေနှင့်အဘို့ကြီးမားသောပိုက်ဆံပေးချေကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်အဖြေကိုရိုးရှင်းခြင်းအားဖြင့်မိမိ၏စံမေးခွန်း၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ရှေ့နေတစ်ဦးအွန်လိုင်း
နှစ်သက်တဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အရပ်ဘက်အမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရည်ရွယ်ဟောသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အစောပိုင်းမွေးစားသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်များအတွက်တိုင်ကြား၊အရြယ္ေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်ထားအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ အားလုံးတရားရုံးကလုပ်ရပ်တွေထွက်ထားကြပါတယ်ဖြင့်လည်းကောင်းအဓိပ္ပာယ်၊သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်။ ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားများ၏ပြုမူသောအပေးအယူနဲ့အစိုးရကိစ္စ၊ဒုတိယအ-အလွန်အနှစ်အ။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးသတ်တရားဥပေဒအတည္ျဖြစ်ရပ်အတွက်။ ပညတ်တရားကိုအမှန်မေးရန်အတွက်ဖျက်သိမ်းနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးအလယ်အလတ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ဒါဟာသတိပြုသင့်တဲ့အရေအတွက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးလည်းကြာ၏ပုံစံအစခ်င္တယ္။ အခြေခံအားဖြင့်၊ဤကိစ္စ၏ထူး။ အဲဒီလုပ်ရပ်များမထိခိုက်ဘူးဆိုတာများ၏အခွင့်အနေဖြင့်နိုင်ငံသားများ၏အမြင်အ ၊ဥပမာအားဖြင့်၊အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ဖွင့်လှစ်ရန်အမှု၊မလိုက်။ အကုဒ်အဘယျသို့ဖော်ပြထားခြင်းဖို့ခွင့်ပြုဖိုင်တိုင်ကြား၊ဒါပေမယ့်အဘယျသို့မဟုတ်။ အယူခံတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အရပ်ဘက်အမှုဤကိစ္စတွင်အတွက်အလွန်တိကျတဲ့။ ဒုတိယပါတီရှိခြင်း'နေက္ခမ္မနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်သည်အမှန်မေးရန်၎င်း၏ဖျက်သိမ်းခြင်းကနေတစ်ချိန်တည်း တရား ၇ ရက်အတွင်းလက်ခံရရှိပြီးနောက်၏အစာတမ်းများ။ ကြေညာချက်အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိရိုသေလေးစားမှုမှာအစည်းအဝေး။ လည်း၊သက်သေအထောက်အထားပေးကြောင်း၊အမြင်တွင်ပါတီများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို။ အဆုံးပြီးနောက်အပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်များအတွက်အလပ်အ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊အချိန်များအတွက်အယူခံဝင်သည်ရေတွက်။ လျှောက်လွှာများအတွက်ဖျက်သိမ်းတင်သွင်းခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့။ ဒုတိယအကြိမ်ရေးသားဖို့ကအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်တော့ဘူး-ဥပဒေကိုတားမြစ်ထားသည်။ တတိယအမျိုးအစားများပါဝင်သည်အဖွဲ့အစည်းများ၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားအရည်မှတ်ကိစ္စများအဆိုပါစနစ်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်မျှ။ သူတို့စဉ်းစားတွေအများကြီး၏ပြည်တွင်းကိစ္စများ:အငြင်းပွားမှုများအကြောင်းစင်၊အိမ္ရာ၊ငွေပေးချေမှုအတွက်ဆက်သွယ်ရဲ့ကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု၊စသည်တို့ကို။ စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်၊ဤအငြင်းပွားကြောင်းလုပ်မဆက်ဆံနှင့်အတူဒါခေါ်တစ္ႏ။ အဆိုပါစနစ်အတွက်ဆန်းစစ်မှုများအဖှဲ့အမျှအတွက်စစ်ရေးနှင့်အရပ်ဘက်တရားရုံး။ အဟောင်းသာဖြစ်လျော့နည်း။ သုံးစွဲအချိန်ပေါ်ဖြစ်စဉ်များအများကြီးလျော့နည်း။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောယူခံတရားရုံး။ တချိန်တည်းမှာ၊ အ ဥပမာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်ရီပတ်ဘလစ်ကန်၊ဒေသ၊မြို့တရားရုံး(မြို့များဖက်ဒရယ်အရေးပါ)။ အထူးကော်မရှင်-ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္-အလုပ်အပေါ်အလားတူတိုင်ကြား။ ထိုအခါအသုံးျအကြပ်ဥပမာ-အတွင်းတည်ရှိထြက္ရွိ။ အကယ္တရားကိုငြင်းပယ်ဖွင့်လှစ်ပီး၊အခွင့်တိုင်ကြားရန်အဆိုပါဥကၠဌသည္။ သူဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒုတိယရှိဖျက်သိမ်းဖို့အခွင့်အငြင်းဆန်ဖွင့်ရန်အကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်။ ဖျက်သိမ်း၏တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်စာရင်းအခြေအနေများတွင်။ အဆိုပါဥပဒေတရားရုံးကလင့်ခ်ထားလဲဆက်စပ်ဥပဒေနှင့်လက္ခြဲမိမိတို့လိုက်နာနှင့်အတူအခြေခံဥပဒေတွင်အမှုအားဖြင့်စဉ်းစားအားလုံးအခြားတရားရုံးများ။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များအလေအပေါ်တိုင်ကြား(နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်၊လွန်း)စေခြင်းငှါမြေများအတွက်စိစစ်တည်းဖြတ်ထြက္ရွိလက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်အစောပိုင်းမွေးစားပြုမူသောအမှု၌၊အရာထမ်းအဖြစ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်တိုင်ကြားရန်နိုင်ငံတော်တရားရုံးများ၊နှင့်အခြားအလားတူပြုမူ။ အဆိုပါလေတိုက်ရိုက်မကံုတရားဆုံးဖြတ်ချက်။ အ ရန်ဆုံးဖြတ်ရှိမရှိ၏ချိုးဖောက်မှုအစည်းဝေးကြီးအပေါ်လူ့အခွင့်အရေး၏သင်တန်းတွင်အစမ်းအားဖြင့်အမျိုးသားတရားရုံး။ မဟုတ်အတွင်း၎င်း၏အရည်အချင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ဖို့အရည်အသွေးအပေါ်။ အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်၏တည်းဖြတ်မူတရားပြုမူသောအမှုအတွက်စနစ်၏အမျိုးသားတရားရုံး။ ကိုဖ်က္သိမ္းတဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အဆာင္တတ္သည္သည္တရား）။ အဘယ်သူမျှမကအခြားအာဏာပိုင်ခွင့်ရှိသည်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သည်ဤအရေးကိစ္စများသို့မဟုတ်အတစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ နအရုရွား၊ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်ဖော်ပြကြောင်းဖော်ပြထားသူမနှင့်အတူရောက်စွက်လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ။ ပြည်တွင်းတရားရုံးသို့မဟုတ်စစ်ရေး-ကိစ္စမရှိပါဘူး။ လူတွေကမကြာခဏတိုင်ကြားကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အကွောငျး-အရည်အချင်းကော်မရှင်။ သို့သော်၊သူတို့အတွက်စေ့စပ်ကမ်းအရေးပါပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်သဘာဝကျပါတယ်အတွက်ကော်မရှင်ကိုအကြောင်းတိုင်ကြားဖို့နှောင့်နှေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အစိတ်အပိုင်းအပေါ်အစီရင်၊မိမိမမှန်ကန်အပြုအမူ။ လျှင်သင်အထိလျှောက်လွှာတွင်ဥပဒေအရ၊၎င်း၏ အနက်၊အဆိုပါတိုင်ကြားမည်မဟုတ်ပင်ဖြစ်စဉ်းစား။ မှန်ကန်သောလျှောက်လွှာဥပဒေ၏အမည်အဖြစ်အစေခံတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေး၊အတည်ပြုခြင်းဖြင့်ဤမြင့်မားတဲ့အခွင့်အာဏာ။ အထိတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၊ဒါဟာဥပဒေကြောင်းအရစဉ်းစားသည်၊ဒါကြောင့်မဖွစျနိုငျအပြစ်ပေး။ တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ရိုက်စနစ်ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်း၊တိုင်ကြားခွင့်ပြုရန်တင်ပြအတွင်းကန့်သတ်အချိန်။ ထိုသို့တင်သွင်းဖို့အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတစ်လအတွင်း၊အစိုးရသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်-ကာလအတွက် ၁၅ ရက်အနေ့အခါတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစေသည်။ ဤအယူခံဥပမာ။ အ ပေးထားပါသည် ၆ လပေါင်းများစွာ၊အကြပ်မှု-၃။ အားလုံးကိစ္စများတွင်၊အချိန်ရေတွက်ပြီးမှ၊နက်ဖြန်နေ့၌ခါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ချွင်းသည်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ပါတီအစည်းအဝေး။ အကယ္ဆုံးဖြတ်ချက်ယူအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေ၊အချိန်အတွက်ဒီပါတီကိုအယူခံသည်ရေတွက်မှနေ့စာရွက်စာတမ်းများအားဖြင့်လက်ခံရရှိ။ င့္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေစည်းမျဉ်းနေကြတယ် ။ အစီရင်တာဝန်ရှိသည်အတွက်အငြင်းပွားသို့မဟုတ်အတွင်းစာမေးပွဲလျှောက်လွှာ၏၊ရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမအငြင်းပွားမှု၊လျှောက်ထားရန်သင့်လျော်သောစံချိန်စံညွှန်းများကိုပြုမူ။ အနက်ကိုလည်းလိုက်နာနှင့်အတူယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံနားလည်၏။ အနက်အားဥပဒေနှင့်တရားရုံးများ။ အဟောင်းနှင့်အတူအပေးအယူ၏အပျက်သဘောဆောင်သောဥပဒေများ၏အလင်း၌။ ဒုတိယထုတ်လုပ်နေမျိုးဆက်တစ်ဆက်၏လျှောက်လွှာ၏ဥပဒေများနှင့်ပြုမူလျက်ထားသည်။ အနက်တစ်ဦးထက်ပိုယေဘုယျအားဖြင့်သဘာဝအတိုင်းတွင်ပါရှိစည်းမျဉ်းများ၏အ ၏ထြက္ရွိ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊တစ်ကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အလေ့အကျင့်အပေါ်တိကျတဲ့အမှုပေါင်းသည္။ သူတို့ကဖော်ပြပါပုံမှန်ဖြစ်ပွား၊အရာအညႊန္းကိုရည်ညွှန်းအတွက်တောင်းဆိုမှုများနှင့်တိုင်ကြား။ ရေးသားသည့်အခါတစ်ဦးတိုင်ကြားရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ကိုးကားဥပဒေပြဌာန်း။ အလားတူ၊ကျမ်းစာ၌ရေးထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရန်ပိုပြီးခက်ခဲသည်ငြင်းပယ်ရန်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ကရကျိုးနပ်မဖြစ်သည်ထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ်အရေးအသားလိုအပ်တဲ့အရာ အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်တရားရုံး။ ဥပဒေရေးရာပြသလေ့အကျင့်ကြောင်းတိုင်ကြားကြသည်စုသည်နှင့်အညီတူညီသောအစီအစဉ်။ အဆိုပါပြဿနာသည်အမြဲတမ်းအတွက်သေဋ္ဌနှင့်မှန်ကန်သောအနား၏ဥပဒေပြဌာန်း။ အဘယ်အဆိုပါတိုင်ကြားဆံ့? ဒါဟာပါဝင်သည်ကိုအောက်ပါအစိတ်အရေအတွက်:စာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူရပါမည်ကိုက်ညီတဲ့အရေအတွက်ကိုပါတီအတွက်အမှု။ တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမှ။ ပေမယ့်အသေးစိတ်စည်းမျဉ်း၏တရားလုပ်ငန်းစဉ်၊များစွာသောရှင်းလင်းချက်များအပေါ်ပလီကေးရှင်း၊အမှားအယွင်းရှိသည့်အပြင်တိုင်းကိစ္စများတွင်။ သို့သော်၊သူတို့တစ်ဦးစီစဉ်းစားဖြစ်သည်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖျက်သိမ်း၏ယခင်ကအတည္ျတရားဥပေဒ။ သဘောတူနှင့်အတူတိုင်ကြားဒါမှမဟုတ်မ၊အများအပေါ်မူတည်လေးနက်၏အအမှားတွေလုပ်-သူတို့လွှမ်းမိုးသောတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကိုက်။ အထပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအအုပ်အပေါ် ၏ဖျက်သိမ်း၏ထိရောက်သောတရားဥပေဒ။ ဒါပေမယ့်ပင်ဤအရေအမှားအယွင်းမှကြွလာသောအခါအောက်ပါ အချက်များကို:အလေ့အကျင့်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်အပြားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ။ နှစ်ဦးစလုံးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တရားသူကြီးသူတို့ကိုသုံးပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်လွယ်အောင်မြင်ရန်ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်ချိုးဖောက်များ၏စံချိန်စံညွှန်းများ၏ဖြစ်စဉ်အထက်ထိရောက်သော။ ဒီတစ်ဦးဘုံအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၊အခါ၊တကယ်တော့၊အဆိုပါဥပေဒ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးကဖျက်သိမ်း။ ဤသူသည်အကြောင်းပြချက်များမှာရှင်းပြရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့၊ကိုချိုးဖောက်များ၏ဆောင်းပါးများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊မြင်အားဖြင့်မြင့်မားတဲ့အခွင့်အာဏာ၊မကြာခဏအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံအဘို့အလျှောက်ထားခြင်းၵအ တရား။ ဥပမာအားဖြင့်ရှိပါတယ်၊အမှားများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအစိတ်အပိုင်း။ အရင်ဖန်ဆင်းသောညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊။ နှင့်အဆင့်မြင့်အာဏာပိုင်အပြောင်းအလဲများအပြားလိုင်းများ၊အကျိုးရလဒ်အညစ်အကြေး။ ဒီအဖြစ်ပျက်နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူအများအပြားတောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအငြင်းပွားသောအခါ၊သူတို့ပြောင်းလဲပမာဏကိုပြန်ဆယ်ပမာဏသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ချက်များတဦးအပေါ်လိုအပ်ချက်များကို။ ဥပမာအားဖြင့်၊အတရားရုံးများ၏အယူခံသဘောတူက်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မွမများ၏အားလုံးနေထိုင်သူများ၏ လံုးခ်င္းအိမ္၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းသာအသိ။ လျှောက်ထားရန်တရားရုံးနှင့်အတူတိုင်ကြားစာရံစေဖို့မျှော်လင့်ဘဲရလဒ်များကို။ အတွက်တရားရုံးချုပ်၏အရုရွား၊အဲဒီအမှုကိစ္စအပေါ်တရားစွဲဆိုဖွင့်၊ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်သူတို့ကိုပေးပို့ဖို့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်အယူခံဥပမာ။ မရှိသလောက်အခါ၊အဓိပကာင္စီ၊သိမ်းအားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ယူကိစ္စများအသစ်နောက်ဆုံးလုပ်ရပ်။ လူမတခါတလေမှရသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းရင်းတစ်ခု၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးဖြစ်စေ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရေးမကြီးသို့မဟုတ်အခြားတဦးတည်းဖြစ်သင့်သည်မေတ္တာဆန့်ကျင်။ ကိုယ်တော်အာရုံစိုက်ရွေးချယ်တဲ့အခါရှေ့နေ? ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊ဤအောက်ပါအချက်များကိုမပြောင်းလဲပြီးနောက်ရှေ့နေအသီးအသီးအစည်းအဝေးသို့မဟုတ်အဆင့်၏အယူခံ။ အလေ့လာမှုပစ္စည်းများအမှု၏အထက်ပါအပေါင်းတို့၏အတစ်ခုလုံးကိုကြာအချိန်အကြာကြီး။ သူတစ်အထူးကုအစပိုင်းတွင်အပေးအယူနှင့်အတူအထူးသဖြင့်အမှု၊အလွယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်လျှင်ကြောင့်အချိန်မပေး အမှု၊အလိုင်းအ၊ရှေ့နေကမရှင်းပြပါ။ ထိုသို့၊၏အယူခံတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အရပ်ဘက်အမှု-အရှည်-။ ကလိုအပ်သည်အသိပညာ၏အခြေအနေ၏အမှုထိခိုက်စေ၎င်းကိုဥပဒေအဖြစ်စံလုပ်ငန်းစဉ်၏။ ပင်သေးငယ်တဲ့အမှားနိုင်သည်ဖြစ်၍၊သူတို့၏အခွင့်အလမ်းကိုပယ်ဖျက်ဖို့အသိသာတရားဆုံးဖြတ်ချက်။
ရှေ့နေဝန်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်း ဖွဲ့နိယာမ:ဖောက်သည်နှင့်ကန်ထရိုက်တာများ(အမှန်တကယ်ရှေ့နေ)လူသိများကြသည်မဟုတ်။ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း:အမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ဥပဒေကြောင်းအရအာမခံနှင့်တာဝန်။ လုံခြုံရေး:အနုဆက်သွယ်ရေးရုပ်သံလိုင်း၊အဆက်အသွယ်လူတစ်ဦး:အမြဲတမ်းအသာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေ၊ပြီးပြည့်စုံစက်ဝန်း၏။ အဆိုပါပထဝီကိုလိုင်းနှင့်အရပ်ဖော်ဆောင်မှုများ:အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်။ အားလုံးအတွက်အခြေအနေ၊သို့မဟုတ်အပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၏နိုင်ငံသား(ပုဂ္ဂိုလ်)လိုအပ်နိုင်ပါသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ရေရှည်ဥပဒေအထောက်အကူ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု(အမည်မသိ)ဥပဒေအထောက်အကူအနေဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဆြးေႏြးမီအကြီးစားရေရှည်စီမံကိန်း။ အဓိကဥပဒေကြောင်းအရအာမခံ၏အရည်အသွေးဆောင်မှုများမှလွှဲပြောင်း၏မူရင်းစာချုပ်နှင့်အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားခဲ့ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအခမဲ့အလွတ်ဖောက်သည်အသေးစိတ်နိုငျသောအားဖြင့်ပြည့်စုံလိမ့်သင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းငွေအမေရိကန်ဒုတိယအမိတ္တူစာချုပ်။ အပိုဆောင်းအာမခံချက်:အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုပေးရသည်အားဖြင့်သီးသန့်ဘဏ်ငွေလွှဲ၊သောငါတို့သည်မည်မဟုတ်သူကိုသိပေးဆောင်နှင့်ဖောက်သည်ဆိုင္ရာအားလုံးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။
ကံမ၊ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာခဲ့ အားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မား၏သုတေသနနှင့်၊နှင့်စာချုပ်စိုးမိုးရေး၊ထိန်းသိမ်းခရိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု၊ရှာသို့ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းဖို့ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို၊နှင့်သေချာဖွဲ့အနေနဲ့သင့်လျော်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်။ အစည်းဆိုင်ရာအခြေခံများအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အခြင့္အေရးမ်ား:လက်တွေ့ကျတိုင်းပြည်အတွေ့အကြုံယန္တရားနှင့်ထိရောက်မှု၏စာချုပ်စိုးမိုးယှဉ်ပြိုင်င့္ကမ္းမော်ဒယ်များနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ပြန်လည်ဒေဝါဖြစ်၏တူရိယာ):ကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ'အခွင့်အရေးခေါင်းစဉ်ကျယ်ပြန့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအားဖြင့်ဒေသခံဥပဒေနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၊ယန္တရား၏၊ဤဆက်ဆံရေးခဲ့ဖွယ်ရှိသည်ပိုမိုအားကောင်းလျှင်အိမ်ရှင်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦနေစဉ်စောင့်ဉာ၊အစိုးရအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်-အဖြစ်သင်တန်းသားများအားဖြင့်ထောက်ပံ့အချက်အလက်အပေါ်ရရှိနိုင်သည့်ကွန်ရက်များ၊၎င်းတို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာစွမ်းရည်၊ဉာ။
ဌာနခွဲရုံးက လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကုမ္ပဏီတစ်ခု၊အရာမူလတန်းသို့မဟုတ်အခြားမှကွဲကွာအဓိကလုပ်ငန်း။ တည်နေရာမှာအများ၏ဌာနခွဲအတွက်၊အမည်၏အဓိကကုမ္ပဏီ၊မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများဖျော်ဖြေကြသည်။ ရှယ်ယာမြို့တော်မဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အတွက်ဌာနခွဲရုံး။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်တာဝန်ဝတ္တရား၏ဌာနခွဲရုံး။ နိုင်ငံခြားကုန်သည်တဦးအ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ္စားျပဳနိုင်ငံခြားရေးသမားအတွက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဆက်စပ်အံဌာနခွဲရုံးအမည်ကိုစေခြင်းငှါတိုက်ဆိုင်၏နာမတော်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားကုန်သည်။ သင်သည်လည်းရွေးချယ်အညီအမည်၊အရာထည့်သွင်းရပါမည်အများအမျိုးမျိုးအပြားနိုင်ငံခြားကုန်သည်များ၊ဘဏ်ခွဲအမည်သို့မဟုတ်တည်နေရာ၏အကိုင်းနှင့်အစကား'ဌာနခွဲရုံး'၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စာချုပ်စာတမ်းအများပြည်သူများ၏မှတ်ပုံတင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အဆက္အသြယ္။ အထူးတောင်း၊များအတွက်အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုလက်ခံစေခြင်းငှါမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(အပါဝင်နာမည်၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ရပ်နှင့်နေ့စွဲများမှတ်ပုံတင်ခြင်း)။ အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လဲ။ အမည်မှတ်ပုံတင်ရန်၊အဘယ်မှာရှိအဓိကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးအရေ၏အဓိကကုမ္ပဏီ(ရှိပါကအဆိုပါဥပဒေ၏နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သည္ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း)ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ဌာနခွဲရုံး(ဆိုပါကခွင့်ပြုချက်သည်ကပေးအပ်သည့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများ၏မှတ်ပုံတင်များအဆိုပါကုန်သည်)တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းအတည်ပြုခွင့်အရေးအချို့သည်လူတစ်ဦးကိုကိုယ္စားျင္ငံျခားေ ကုန်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဆက်စပ်အံဘဏ်ခွဲရုံးသတင်းအချက်ကလူတစ်ဦးအခွင့်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့နိုင်ငံခြားကုန်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဌာနခွဲရုံး(အမည်၊အရိုး၏နေထိုင်ရာအရပ်၊မွေး၊နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)၏ဝိသေသလက္ခဏာများပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ။ အစုရွယ္ယာ၊ရှယ်ယာမြို့တော်၊ဥပဒေရေးရာလိပ္စာ၊ဘုတ်အဖွဲ့၏ဒါရိုက်တာများ၊ကာင္စီ၏ကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏။ ဝိသေသလက္ခဏာများကိုယ်စားပြုနိုင်ငံခြားကုန်သည်။ တရားဝင်အနေ၊ဥပဒေလိပ္စာ၊စီမံခန့်ခွဲမှု၊များ၏အမည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏။ နိုင်သူတစ်ကုမ္ပဏီ? ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများအတွက်လတ္ဗီး။ ဖွဲ့စည်းခြင်း။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။ ဘယ်လိုမှတင်ပြသောစာရွက်စာတမ်းများ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါဘူး? ဘာအချက်အလက်များကိုရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းရှေ့နေ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဗားရှင်းအဆိုပါဂီတ"ချီကာဂိုမြို့"၏သူရဲကောင်းရစ်ချတ် ၊ရှေ့နေဘတ်စ်ကား ၊ေျပာသူလိုင်း:"ယေရှုနေထိုင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်နှင့်ရွေးချယ်လိုသကဲ့သို့ငါ့ကိုသင့်ရဲ့ရှေ့နေ၊အားလုံးနိုင်ကြပြီထွက်လှည့်ကွဲပြားခြားနား."။ အမှန်စင်စစ်၊ထိုရှေ့နေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအားမကိုးရန်ခက်ခဲသည်။ ယုံကြည်လျှင်အစာ၏သတင်း၊ရုပ်သံလွှင့်ပြောဆိုပြသ၊နှင့်အတွေ့အကြုံသူငယ်ချင်းများ၊အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏အမှုများသည်လိုအပ်သောလူတိုင်းအတွက်၊အဘယ်သူသည်တယ်။ ပါဝင်ကြောင်းအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏အမှုများမကြာခဏတစ်ဦးချင်းစီမှရှေ့နေအတွက်ပြည်တွင်းကိစ္စဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။ ဒါဟာထက်ပိုသည်ယုတ္တိ:ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ရှေ့မှာသင့်အယူခံတရားရုံးနှင့်စတင်ရေးတောင်းဆိုမှုများနှင့်တိုင်ကြားရန်အရေးကြီးသည်အထူးကုနှင့်တိုင်ပင်။ သာနှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးအတွေ့အကြုံကရှေ့နေရှင်းပြပြဿနာကိုမေးလူအပေါင်းတို့မေးခွန်းများကို၊ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ရန်လုံလောက်စွာအကဲဖြတ်အလားအလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ များသောအားဖြင့်အကူအညီတစ်ဦး၏ရှေ့နေနှင့်အတူအစပြုလျှို့ဝှက်ျပာပါတယ္။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊အားလုံးညှိနှိုင်းလုံးဝလျှို့ဝှက်အတွက်သဘာဝ
ကိုဘယ်လိုပြန် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှဝယ်ယူ။ အခွန်ထုတ်ယူဝယ်ယူသည့်အခါတစ်ဦးတုိက္ခန္း
အခုတော့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ပြန်သွားဖို့ ၁၃ ကိုဝယ်ယူ၏။ ဒီအခွင့်အလမ်းများဆွဲဆောင်များအပြားအိမ်ပိုင်ရှင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊၁၃ ပမာဏ၏ကုန်အလွန်ကောင်းလျော်ကြေး။ ဒါဟာထွက်လှည့်ကြောင်းရုရှားအတွက်သင်သာကိုပေးပြည်နယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုခုရရှိရန်ပြန်လာအတွက်။ ရွေးချယ်စရာများသကဲ့သို့အတူတူပုံမှန်အရောင်းအဝယ်၊နှင့်အပေါင်ခံဘို့အ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊သင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများသင်တို့ထံမှ။ ဘယ်လိုမှပြန်လာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှဝယ်ယူ။ အရာကိုလိုအပ်သည်? အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ပါ။ ဒါဟာသတိပြုသင့်မှာတစ်ကြိမ် -ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်။ ပြား၊ဒါပေမယ့်လုံးဝကိုကၽြန္ေတာ္တို။ ဖြတ်တောက်များအတွက်အတုိက္ခန္း(သူတို့ဟုခေါ်ကြသည်ခံေျမ)လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအခွန်ထမ်းခဲ့သူ။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊သူငွေပေးချေဝင်ငွေအခွန်။ ဒီအယူအဆ၊ဓလေ့ထုံးတမ်းနားလည်ရန်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊တစ်ဦးတရားဝင်အလုပ်သမားနိုင်ငံသား။ ဒါပေမယ့်မလုပ်ခဲ့ဘူးသောသူတို့မည်သည့်ဝင်ငွေကြေငြာ၊အခွင့်အရေးရှိဖို့လက်ခံဖြတ်။ ထို့အပြင်ကြီးမားတဲ့ဝယ်ယူမှု၏ပုံစံအတွက်အိမ်ခြံမြေလိမ့်မည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်၏အခွန်သည္။ နှင့်ဤအစဉ်အမြဲမကောင်း။ စင်လည်းအမှန်သို့ပြန်လာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်။ သာသူတို့အဘို့စာရင်းကိုအရာအားလုံးအတွက်လိုအပ်သောစစ်ဆင်ရေးအတန်ငယ်တိုးချဲ့။ ဒါပေမယ့်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်ကာလအချိန်သင်အကြံပေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဤမေးခွန်း။ အရခေတ်ဥပဒေများ၊သင်အဘို့အမေးနိုငျအရာဝတ္တုများအတွက်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအတွင်း ၃ နှစ်၏နေ့စွဲကနေထိုအရောင်းအဝယ်၊ဒါပေမယ့်မအကြာတွင်။ သာထိုသို့သောဓလေ့များမှာအားဖြင့်သာတည်သည့်အခွန်ဥပဒေများတွင်ရုရှားနိုင်ငံ။ ဒါပေမယ့် အလေ့အကျင့်၊အရာအားလုံးအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းအတွက်အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်။ လွယ်ကူပါတယ်။ ရုံအလုပ်တစ်ခုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နိုင်ငံသားများအကြံပြုအစည်းအဝေး၏အဆုံးအခွန်အစီရင်ခံကာလအတွင်း။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊တချို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်အမှု၊အဖြစ်လွှဲပြောင်းရန်ငွေ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးထိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေကြောင်းတောင်းဆိုရန်သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်။ ခန့်မှန်းခြေ ၁၊၅-၂ လ။ နှင့်ထို့အပြင်၊အဲဒီအကြောင်းကြာ ၆၀ ဖို့ပိုပြီးရက်ပေါင်းလွှဲပြောင်းထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း။ အဆိုပါရလဒ်-အရာအားလုံး၊သင်သည်မကျင့်လျှင်၊အကောင့်သို့ယူအဘိတ်၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ဒါကြောင့်အကြာက ၄ လ။ ဒါကြောင့်၊သင်ဘယ်လိုအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်ပြန်လာပြီးကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေအခွန်ကနေဝယ်ယူတိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊သင်စတင်သင့်ဖြေရှင်းသည်ဤအလုပ်တခုကိုအနှေးနဲ့အမြန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ပထမဦးဆုံးနှင့်အများဆုံးအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်၊အရာအတွက်အသုံးဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွား-ဒါဟာအထောက်အထားကဒ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊တစုံတယောက်သောသူသည်အမှုကိုပြုလိမ့်မည်၊ဒါပေမယ့်အခွန်အာဏာပိုင်များအပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြောင်းတင်ပြရမယ်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိဘဲပျက်ကွက်။ ပိုပြီးအတိအကျ၊ပုံမှန်အစည်းအဝေးကော်ပီကူး။ စာမျက်နှာအားလုံးဖြစ်ရမည် ပြီးမှပူးတွဲအဓိကစာရင်းများစာရွက်စာတမ်းများ။ မရှိရင်အထောက်အထားကဒ်၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖြေဖို့ဘယ်လိုပြန်လာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူ၏။ သင်ရိုးရှင်းစွာအဖြစ်ငြင်းဤကိစ္စတွင်အတွက်။ အဆိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အပြည်၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊အဘယ်သို့လိုအပ်သည်များအတွက်မည်သည့်အရောင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ အာရုံစိုက်ဖို့နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့တကယ်တော့တစ်ဦးကကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ရမည်မဖြစ်မနေရေးသားပြုစုတင်ပြရန်၊အခွန်အာဏာပိုင်များ။ သင်ပြောနိုင်အတွက်အခမဲ့။ အရခေတ်ဥပဒေများ၊သင်ပြန်လာအတြက္သာျမှဝယ်ယူ၏အခန္း(၁၃ ထုတ်ယူ)ကိုသာလျှင်အဝယ်တာင္း။ ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်၎င်း၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံယခင်အရှင်၊အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့အချက်အလက်၊အချက်အလက်အကြောင်းအတုိက္ခန္းနှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်။ မမေ့မလြော့ပါပူးတွဲပါအသေးစိတ်အချက်၏အကောင့်ကိုအရာဖြစ်အောင်လုပ်ထိုက်တန်တစ်ဦးပြန်အမ်း။ လျှင်ဤသည်မဖြစ်၊ထိုအခါသင်ရှိသည်လိမ့်မည်အခွေပျောက်ဆုံးစာတမ်းများ၊သို့မဟုတ်၊အဖြစ်မကြာခဏဖြစ်ပျက်၊သင်ငြင်းဆန်တစ်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း-သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဖိုင်တစ်ဦးလျှောက်လွှာနှင့်အတူ စာရွက်စာတမ်းများမှအခွန်မှအလွန်အစအဦး။ လာမယ့်ဘာကိုဖွင့်။ ဘယ်လိုမှပြန်လာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှဝယ်ယူ။ အမိန့်မှအခွန်အာဏာပိုင်ဒါခေါ်ခွန်ကြေညာ။ ကဟုခေါ်သည် ၃-။ သင်ရှိသည်ကိုသာ၎င်း၏မူရင်း၊အမှတ်မိတ္တူ။ အဘယ်သည်ဤအစီရင်ခံ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံသင့်ဝင်ငွေ။ လျှင်သင်ကိုယ်အဘို့အလုပ်မလုပ်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အစေပါင္းမ်ားစြာ။။။။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အလုပ်ရှင်များအတွက်ကူညီ။ ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်ပဲ ၃- ပြည့်စုံသည်အားဖြင့်အသီးအသီးအခွန်ထမ်း။ တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်ကဲ့သို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချက်မှာထင်ရ။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယ်သို့ပုံစံအရေး၏ဝယ်ယူရရှိမှုအိမ္ရာခဲ့ရာအရပ်ဖြစ်ရန်(ပေါင်နှံသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းပြီးဝယ်ယူရောင်းချခြင်း)၊သင်လိုအပ်ကိုအတည်ပြုရန်သင့်ဝင်ငွေ။ ဒီနေရာမှာလိုအပ်သည်ပစ္စုပ္ပန်အဆိုပါလက်မှတ်ပုံစံ ၂-။ အဖြစ်အတိတ်အတွက်အမှု၊သာမူရင်းစာတမ်းလိုအပ်နေပါသည်။ လျှင်သင်ကိုယ်အဘို့အလုပ်မလုပ်၊သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်လွတ်လပ်စွာဖြည့်စွက်ဤအချက်အလက်။ ရှိတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအလုပ်ရှင်? အခါအဆိုပါစာရင္းဦးစီးဌာန၏ကုမ္ပဏီ၊သင် အပ်ပါလိမ့်မည် ၂-။ နှင့်အတူဤစာရွက်စာတမ်းရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေအတွက်၊နိယာမ။ ကြောင်း၏ထုတ်လုပ်မှုအဆိုပါလက်မှတ်နိုင်ပါတယ်အချို့ကိစ္စများတွင်အချို့သောအချိန်ယူနိုင်ပါသည်? ပြီးပြည့်စုံစာရင်းများအားလုံးအမျိုးမျိုးအတွက်အလှူငွေအကုန်နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့၊မှတစ်ခုဖြစ်သောအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မသင့်သည်အရေးကြီးဆုံးအရာ-အကြောင်းသတင်းအချက်ကောက်ချက်ချအရောင်းအဝယ်။တချို့မပါဘဲရြက္စာတမ္းမရတဲ့အရာဝတ္တုများအတွက်ဝယ်ယူ၏။ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့နေရာလေးကိုအတွက်လာ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဤစာခ်ဳပ္၏ရာင္းရန္ရွိသည္။ ဒါဟာအကြံပြုလိုလက်မှတ်ထိုးရန်တစ်ဦးအပိုဆောင်းမူရင်းမိတ္တူအဘို့အထုတ်ယူ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊အလုံလုံလောက် မိတ္တူ။ ထိုအခါသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်လက်မှတ်တစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏အခန္း။ ဒါကြောင့်မပါဘဲ၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်လျှောက်ထားရန်အဘို့အထုတ်ယူ။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အထိလက်ခံရရှိဤစာရွက်စာတမ်း။ ပုံမှန်အတိုင်းမိတ္တူများ၏လက်မှတ်၊အမှတ်ပြုမခံ၊ပြုလိမ့်မည်။ ပေမဲ့၊အဖြစ်အလေ့အကျင့်ရှိုး၊နိုင်ငံသားအများဆုံးမကြာခဏ နှင့်အလုပ်တစ်အာမခံချက်သည်။ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများအတွက်ငွေပေးချေမှု၊ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေါ် လက်ခံရရှိရန်ပုံငွေ၏ယခင်ပိုင်ရှင်များ-ဤအမှုအလုံးစုံလည်းဖြစ်မှပူးတွဲကြေငြာနှင့်အပလီကေးရှင်း။ သင်နိုင်အောင်မိတ္တူ။ အဓိကအရာတစုံတခု-သေချာအောင်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများရှိသည် ။ ဆိုရင်သင်ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းများအတွက်၊တစ်စုံတစ်ဦးမှသက်သေပြ၏လက်ျာဘက်တစ်ဦးမှထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းသည်နီးပါးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ အားလုံးသတင်းအချက်အသင့်ကြောင်းညွှန်ပြနေတယ်ဝယ်။ ယခုအတော်လေးမကြာခဏရှိအပေါင်ခံ။ ဘယ်လိုမှပြန်လာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းသာဤကိစ္စတွင်အတွက်ဝယ်ယူ။ ဒါဟာမခက်ခဲလွန်းဒီလိုလုပ်ဖို့။ အားလုံးပြီးနောက်၊သင်ရုံအထက်စာရင်းအချို့မှစာရွက်စာတမ်းများ။ ရှိပါတယ်နှစ်ဦးသာ၏။ ပထမဦးဆုံးအပေါင်ခံ။ ဖြစ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်လုံလောက်တဲ့သို့မဟုတ်မူရင်း၊သို့မဟုတ်လက်မှတ်မိတ္တူ။ မပါဘဲဒီအပြန်အမ်းငွေကိုထုတ်ယူမည်မဟုတ်။ ဒုတိယအဖြတ်များအတွက်ငွေပေးချေအကျိုးစီးပွားအပေါ်အပေါင်ခံ။ အတူကျန်ပြန်လာအတွက်၊၁၃ လိမ့်မည်ငြင်းရင့်ကျက်သည်အထိ။ အကောင့်သို့ယူကိုအသာပုတ္ပါ။ အဘယ်သူမျှမ ကိုက်။ မူအရ၊ရှိသမျှသောင့်။ မပိုစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပေမယ့်ချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုမှပြန်လာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှဝယ်ယူ။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊သင်တောင်းဆိုချက်ကိုအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ၊ဒါပေမဲ့သူတို့မသင္မေနရ(အကြံပြုလိုတယ်ဖို့ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အတွက်သူတို့ကိုတိုးသည်):အားလုံးနှင့်အတူအထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ၊သင်လျှောက်ထားရန်အခွန်အာဏာပိုင်မှာသင့်၏နေထိုင်ရာအရပ်။ သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တစ်ခုထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း။ ပါကစနစ်တကျပြင်ဆင်၊နောက်ပြဿနာများရှိလိမ့်မည်နှင့်မျှမပျက်ကွက်။.
© 2021 အားလုံးရှေ့နေလောကအတွက်! ဥပဒေရေးရာကဖေးနှင့်အတူရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။